နတေို့ငျးလုပျရငျခံမှာလား – My Blog
ဦးမောငျ ဆုံးသှားပွီ ဆိုသောသတငျးအား သူကွားကွားခငျြးမယုံနိုငျသေးပေ။ သူနယျသို့ ဦးကောငျး စလှေတျသော အလုပျကိစ်စဖွငျ့ သှားရောကျနခြေိနျတှငျ ဦးမောငျသူ၏ အိမျတှငျမူးလဲပွီး ဆုံးပါးသှားပွီ ဆိုသော သတငျးကို ဖုနျးဆကျပွောသဖွငျ့ သိရှိခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ သို့သျော ဦးမောငျဆုံးပွီ ဆိုသော သတငျး သူ့ထံဖုနျးဆကျပွီး ပွောသောသူက ဦးမောငျဇနီး ဒျေါကသေီထှနျး ကိုယျတိုငျဖွဈနသေညျ။ သူ ယုံပငျ မယုံနိုငျ။ ပွောရလြှငျ သူ အခုထိမယုံနိုငျသေး။ မိုးထကျမောငျ ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျ ဦးမောငျကား ပြျောပြျောနတေတျသူ၊ အသကျ (၅၀) ခနျ့ရှိပွီး ရုပျကလညျး ဖွောငျ့သညျ။ သဘောကလညျး ကောငျးသဖွငျ့ လူတိုငျးက ခငျကွသညျ။ သူ့ဇနီး ဒျေါကသေီထှနျးကား အသကျ(၄၀)ခနျ့၊ အသားဖွူဖွူ၊ခြောခြောနှငျ့ မသိလြှငျ (၃၀) လောကျဟု ထငျရ လောကျအောငျ နုပြိုသညျ။ သူကား နယျမွို့လေးမှ မိမရှိ ဖမရှိ တဈကောငျကွှကျ။ (၁၀) တနျးအောငျပွီး တက်ကသိုလျ တကျမညျ့နှဈတှငျ အဖေ ဆုံးသှားခဲ့သညျ။
အမကေ သူ ငယျစဉျတောငျကွေး ကလေးဘဝကတညျးက ဆုံးပွီ။ သူပငျ မမှတျမိတော့။ ဒီလိုနဲ့ ကွုံရာကပြနျးလုပျပွီး ဘဝကိုရုနျးကနျနစေဉျ။ တဈနေ့ သူ့ဘ၀ ပွောငျးခဲ့၏။ ညဖကျ ကုနျထမျးပွီး ပွနျလာစဉျ သူတို့မွို့ကို အလုပျကိစ်စနဲ့ ဖွတျသှားရငျး ကားလမျးမှာ ကားပကျြနသေော ဦးမောငျကို ဆေးသမား လူငယျလေး (၃) ဦးမှ လုယကျရနျ ကွိုးစားနသေညျကို သူက ကူညီခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဦးမောငျက သူ့ကို ကြေးဇူးရှငျအဖွဈ သတျမှတျပေးပွီး မွို့ကို ချေါသှားခဲ့တယျ။ သူ့ လုပျငနျးတှမှော သူ့ကိုယျစား တာဝနျယူ လုပျကိုငျတတျအောငျ သငျပေးခဲ့တယျ။ သားသမီး မရှိတဲ့ ဦးမောငျတို့လငျမယားဟာ သူ့ကို သူတို့မိသားစုရဲ့ ညီအရငျး၊ မောငျအရငျးသဖှယျ သဘောထားပွီး အရေးကွီးကိစ်စတှမှော တိုငျပငျတယျ၊ ပွီးတော့ သူ့ကိုလညျး ဦးမောငျက သူတို့အိမျမှာပဲ ချေါထားခဲ့တယျ။ ဦးမောငျက မိတျဆှတှေနေဲ့ သူ့ကို မိတျဆကျပေးရငျတောငျမှ သူ့ကို ဥိးမောငျက သူ့နယျက တဈဝမျးကှဲညီလို့ပဲ ပွောတယျလေ။ ဖွဈရလေ။ ကိုကွီး ဦးမောငျရယျ။ သူ သတငျးကွားကွားခငျြး သူတညျးနတေဲ့ တညျးခိုခနျးကအခနျးထဲမှာ တဈယောကျထဲ ငိုနခေဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျတှကေို အေးအေး ထားကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ ဦးမောငျကို သိပျခဈြပွီး သူ့ကို မောငျတဈယောကျလို ခငျတှယျနရှောတဲ့ မမကသေီထှနျးရဲ့ မကျြနှာကို မွငျယောငျရငျး စိတျပူသှားမိတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ သူနယျကနေ ညတှငျးခငျြးပဲ ရနျကုနျကို ပွနျလာခဲ့ပါတော့တယျ။
. ကိုကွီးရေ ကိုကွီးသိပျခဈြတဲ့ ကိုကွီးညီရောကျလာပွီလေ။ ဟငျ့ဟငျ့။ အိမျထဲရောကျရောကျခွငျး မမကသေီထှနျးက ဝမျးနညျးသံနဲ့ ငိုလိုကျပါတယျ။ သူ အိမျကိုပွနျရောကျတဲ့အခြိနျမှာ ဦးမောငျရဲ့ အလောငျးကို မွခေပြွီးနပေါပွီ။ သူလာတဲ့လမျးမှာ ရကွေီးပွီး တံတားတှေ ကြိုးနတောကွောငျ့ ဦးမောငျအလောငျးကို မွငျတောငျ မမွငျလိုကျရပါဘူး။ သူ့ရငျထဲမှာ ငိုခငျြပမေဲ့ သူငိုရငျ ဦးမောငျမိနျးမ မမကသေီထှနျးက ပိုဝမျးနညျးမယျ ဆိုတာသိလို့ မငိုမိအောငျ ထိနျးထားပါတယျ။ “ဘယျလိုဖွဈတာလဲမမ” “မောငျလေးရယျ နငျ့ကိုကွီးကလေ။ ဆုံးမဲ့မနကျက အလုပျသှားမယျဆိုပွီး ရခြေိုးတယျ။ ပွီးတော့ ရခြေိုးခနျးထဲက တျောတျောနဲ့ ထှကျမလာတာနဲ့ တံခါးသှားဖှငျ့ ကွညျ့တော့ မငျးကိုကွီး လဲနတော တှတေ့ယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆေးရုံကို ပို့ကွတယျ။ သူက သတိလညျလာသေးတယျ။ မငျးကို တဈခုခုမှာခငျြတဲ့ သဘောရှိတယျ။ မငျးနာမညျပဲချေါနတော။ ပွိးတော့။
ဟငျ့ဟငျ့” မမကသေီကား စကား ဆကျမပွောနိုငျတော့။ ကိုယျလုံးလေးကိုလှုပျခါပွီး ငိုတော့သညျ။ (၂) ဦးမောငျရဲ့ နာရေးကိစ်စတှကေို စီစဉျရ၊ တဈဖကျကလညျး ဦးမောငျရဲ့ မပွတျသေးတဲ့ အလုပျတှကေ ဦးမောငျ မရှိတော့ သူပဲ လုပျပေးရတယျ။ .မမကသေီမှာကလညျး အဖအေမတှေကေ မရှိကွတော့သလို ဦးမောငျမှာကလညျး ငယျကတညျးက မိဘမဲ့ဆိုတော့ ဆှမြေိုးတှကေ မရှိပါဘူး။ မမကသေီ အနနေဲ့ကလညျး ဦးမောငျရဲ့လုပျငနျးတှကေို မသိပါဘူး။ နားလညျး မလညျဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ ကုမ်ပဏီကို သူကပဲ ဦးဆောငျပွီး ဆကျလကျ လုပျပေးနရေပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မမကသေီအိမျမှာ ဆကျနဖွေဈခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ တဈနမှေ့ာတော့ သူ ကုမ်ပဏီကိစ်စနဲ့ ဧညျ့သညျတဈယောကျကို စားသောကျဆိုငျတဈခုမှာ ခြိနျးထားရငျး ငွိမျသကျနတေဲ့ သူ့ဘဝမှာ မထငျမှတျတာတှေ ဖွဈခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျက သူက ဖုနျးပှတျနတောပါ။ ဒီအခြိနျမှာ တဈဖကျခနျးက အသောကျဝိုငျးက စကားပွောသံ တဈခြို့က သူ့နားထဲ ရောကျလာပါတယျ။ .နခေ့ငျးဘကျ လူရှငျးနခြေိနျ ဆိုတော့ အတိုငျးသား ကွား နရေတာပေါ့လေ။ “ဟိုလကှော။ မိုးထကျမောငျကုမ်ပဏီက လငျးထကျ ဆိုတဲ့ကောငျလေးကို ပွောတာလား” ဟိုကျရော။ သူ့နာမညျ ပါလာသဖွငျ့ ဘာတှလေဲဟဆိုပွီး သူ ဆကျနားထောငျနေ၏။ “အငျးလေ ကောငျလေးက ရုပျကလညျး ဖွောငျ့တယျ။ ပွိးတော့ လုပျငနျးလညျး ကြှမျးတယျ။ ငါတော့ ထငျတယျ။ ဒျေါကသေီထှနျးကမြား ဒီကောငျလေးနဲ့ ငွိနတောမြားလား” “ဟ။ ဟုတျခငျြလညျး ဟုတျမှာပေါ့ဟ။ ကသေီထှနျးက အရှယျကလညျး ရှိသေး။
ကိုမောငျကွီးကလညျး ဆုံးတော့ အားကိုးခငျြရှာမှာပေါ့လေ။ ဟုတျဖူးလား။ ဟားဟားဟား” သူ ဒေါသပငျ ထောငျးကနဲ ဖွဈသှား၏ ဘယျသူတှမှေနျးကို မသိ။ .စျောစျောကားကားပငျ။ သူနဲ့ မမကသေီ ရိုးရိုးသားသား နတောကိုပငျ သှားပုတျလလှေငျ့ ပွောခငျြနကွေ၏။ ခကျတာဘဲ။ “ကိုလငျးထကျ” သူ့ရှသေို့ ခြိနျးထားသော ဧညျ့သညျ ရောကျလာပွီ။ ခုနက ကိစ်စကို မသှေ့ားတော့သညျ။ “ကဲထိုငျဗြာ။ အကိုတဈခုခုမှာ။ ( ) က နရောက အဆငျပွတေယျ အဲ့နရောကိုဝယျပွီး—–”
(၃) အိမျရှကေို့ ကားပွနျရောကျတော့ မမကသေီထှနျးကား ခွံထဲတှငျ။ “တီတီ” “မအေးရေ နငျ့ကိုလေးပွနျလာပွီ။ တံခါးဖှငျ့လိုကျ” အိမျဖျောမလေးမိအေးကား တံခါးကို လာဖှငျ့ပေးသညျ။ “ကဲမောငျလေး။ ရအေရငျခြိုးမလား။ ထမငျးအရငျစားမလား” “ကြှနျတျော ရအေရငျခြိုးလိုကျဦးမယျ” “ကဲ ဒျေါလေးမွရေ ထမငျး သှားပွငျ ထားလိုကျတော့။ မောငျလေး ရခြေိုးပွီးရငျ ထမငျး အဆငျသငျ့ စားလို့ရအောငျ။ ဒီနငေ့ါ့မောငျကွိုကျတဲ့ ပုဇှနျထုပျခကျြထားတယျ” မမရဲ့ သှယျလတြဲ့ လကျခြောငျးဖွူဖွူလေးတှကေ သူ့လကျမောငျးကို ကိုငျရငျး ပွောလိုကျတာပါ။ ခါတိုငျး သူ့အနနေဲ့ မမက ဒီလိုပဲ သူပွနျလာတိုငျး ခုလိုတဈခါတဈရံ သူမ မောငျအရငျးလို သဘောထားပွီး လကျမောငျးကို ဒီလိုခြိတျတတျပမေဲ့ ဒီနေ့ တဈမြိုးကွီး ဖွဈနပေါတယျ။
နလေ့ညျက ဆိုငျထဲက ကွားခဲ့တဲ့ စကားတှကေို ကွားယောငျရငျး သူ့ နှလုံးခုနျသံက မွနျလာသလိုလို။ မမဟာ မွနျမာဆနျဆနျ အပွာရောငျပျေါမှာ အဖွူပှငျ့လေးတှပေါတဲ့ ရငျဖုံးနဲ့ ထမိနျကို ဝမျးဆကျ တှဲဝတျထားတာပါ။ ခါးလညျလောကျ ရှိတဲ့ ဆံပငျတှကေို ထုံး ထားတာကွောငျ့ လညျတိုငျ ဖွူဖွူလေးနဲ့ ဂုတျသား ဝငျးဝငျး လေးတှကေို မွငျနရေပါတယျ။ ခါးက သိမျပွီး တငျးရငျးလတြဲ့ တငျသားတှကွေောငျ့ မသိတဲ့သူက အပြိုလို့ ထငျမိကွမှာပဲ။ အငျး။ ငါ မကွံကောငျးမစညျရာ ဘာတှေ တှေးနပေါလိမျ့။ ကိုယျ့ ကြေးဇူးရှငျကို ဟူသော အသိ ဝငျလာခြိနျတှငျ အာခေါငျက ခွောကျသလိုလို ရငေတျခငျြသလိုလို ဖွဈနတော သတိထားမိ၏။
(၄) ကသေီကား မှယေ့ာပျေါတှငျ တလူးလှနျ့လှနျ့ဖွငျ့ အိပျမပြျောနိုငျသေးပေ။ ညနကေ မောငျ ကွညျ့သော အကွညျ့တှကေို ပွနျမွငျယောငျမိနသေညျ။ အိမျပွနျရောကျရောကျခငျြး သူမက မောငျ့ လကျမောငျးတှကေို သှားကိုငျတဲ့ အခြိနျမှာ မောငျ့ အသကျရှုသံတှေ ပွငျးနတော သိတယျ။ ပွီးတော့ သူမ ဂုတျဖွူဖွူလေးကို အကွာကွီးပဲ စိုကျကွညျ့နတောတှတေ့ော့ စိတျကွညျနူးမိတယျ။ မောငျရယျ။ မမ အခဈြတှကေို မငျးလေး မသိဘူးနျော။ မောငျက အေးစကျစကျနဲ့။ ကိုယျ့ ကြေးဇူးရှငျရဲ့ ဇနီးဆိုပွီး ထိနျးနတောမြားလား။ ဒါက ပွဈမှားတာ မဟုတျဘူးမောငျရဲ့။ နငျ့ ကိုကွီးက ဆုံးသှားတာ ကွာပွိလေ။ တဈနှဈလောကျ ရှိရော့မယျ။
ဒါမှမဟုတျအပြိုမဟုတျလို့ စိတျ မဝငျစားတာလား မောငျရယျ။ ဒါမှမဟုတျ ခဈြသူမြား ရှိနလေို့လား။ တှေးရငျးနှငျ့ပငျ ရငျမောလာသညျ။ မမကသေီထှနျး တဈယောကျတညျး အခနျးထဲမှာ အတှေူးကမ်ဘာထဲ ခြာခြာလညျရငျး အိပျမပြျောနိုငျသလို တဈဖကျမှာလညျး လငျးထကျမှာလညျး အိပျမပြျောနိုငျအောငျ ဖွဈနပေါတယျ။ မမကသေီထှနျးကို မွငျယောငျ နသေလို ကိုကွီးဦးမောငျကိုလညျး သတိ ရရ လာတာမို့ အဲ့ညကသူတို့ နှဈယောကျလုံး အိပျမပြျောခဲ့ပါဘူး။ အိပျယာ ထဲမှာ အိပျမရတဲ့ လငျးထကျ တဈယောကျဟာ အာခေါငျ ခွောကျပွီး ရငေတျသလိုလို ဖွဈခငျြ နတောကွောငျ့ ဝရံတာဘကျကို ထှကျခဲ့ပါတယျ။ စီးကရကျဘူးထဲက စီးကရကျ တဈလိပျကို ထုတျသောကျ နပေါတယျ။
စီးကရကျတဈလိပျ ကုနျတဲ့အခြိနျမှာတော့ (၁၅)မိနဈလောကျ နပွေီး အခနျးဘကျကို ပွနျထှကျခဲ့တယျ။ မမကသေီထှနျးအခနျးရှေ့ ရောကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ အခနျးထဲက မီးလငျးနတောကွောငျ့ မမတဈယောကျ အခနျးထဲမှာ မီးမပိတျမိဘဲ အိပျပြျောနတေယျ ထငျ တယျ ဟုတှေးမိတယျ။ သူ့ခွလှေမျးတှေ တနျ့သှားပွီး အခနျးဘကျကို အမှတျမထငျကွညျ့မိတဲ့ အခါမှာတော့ တံခါးက အနညျးငယျ ဟ နတောကို တှရေ့တယျ။ “အခနျးရှကေ့ မောငျလေးလား” “ဗြာ ဟုတျ” “အိပျမပြျောဘူးထငျတယျ။ နဦေးမမထှကျလာခဲ့ဦးမယျ ခွံထဲဆငျးပွီးလမျးလြှောကျရအောငျ” (၂)မိနဈလောကျ စောငျ့နတေဲ့အခါမှာ မမကသေီထှနျးဟာ အခနျးထဲက ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ အိပျယာထဲက ထလာတာမို့ မမမကျြနှာလေးဟာ ပငျကို အတိုငျးလေးပါပဲ။ ဆံပငျလေးတှကေ အနညျးငယျ ဖရိုဖရဲဖွဈနပွေီး ညဝတျ ပိုးပြော့ဝတျစုံကို ဝတျထားတာကွောငျ့ မမရဲ့ ကိုယျလုံးအလှတှေ ကောကျကွောငျးတှကေ အတိုငျးသားပါပဲ။
အပြိုတှထေကျပငျ တောငျ့ပွီး လှပ လှပါတယျ။ ဒါကို အသကျ(၄၀)လို့ပွော ဘယျသူက ယုံမှာတုနျး။ ၃၀နှဈလောကျသာ ထငျနရေ၏။ အာခေါငျခွောကျသလိုလို ဖွဈလာတာကွောငျ့ မကျြနှာကို တဈဖကျကို မသိမသာ လှဲထား လိုကျပါတယျ။ (၅) ကသေီထှနျးဟာ လငျးထကျနဲ့အတူ အောကျကိုဆငျးလာခဲ့ပါ တယျ။ အခြိနျက ည(၁)နာရီလောကျ ရှိနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ အိမျအောကျထပျမှာနတေဲ့ ဒျေါမွနဲ့မိအေးတို့က အိပျကုနျပါပွီ ဒါကွောငျ့ အသံ မကွားအောငျ ခွဖေော့ပွီး ဆငျးလာကွပါ တယျ။ အနောကျဘကျ တံခါးကနေ ထှကျလာကွပွီး ခွံထဲမှာ လမျးလြှောကျကွပါ တယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ညဖကျဆိုတော့ ခှေးတှကေ အုပျစုလိုကျ အူကွပါ တယျ။
“အူ ဝူး ဝူး…” ကွောကျလို့ထငျ တယျ။ မမကသေီထှနျးဟာ လငျးထကျရဲ့ လကျမောငျးကို သူမလကျနဲ့ကိုငျပွီး “မောငျလေး မမကွောကျ တယျ။ ” “မကွောကျပါနဲ့ မမရယျ ကြှနျတျော တဈယောကျလုံး ရှိနတေဲ့ဟာ” ခွံထဲက ပနျးရုံနံဘေးက ခုံတနျးလေးမှာ သူတို့နှဈယောကျထိုငျပွီး “မောငျလေးရယျ နငျ့ကိုကွီး မရှိတော့ ဘဝွကီးကခွောကျသှသှေ့ားသလိုပဲ နငျရော ရညျးစားလေး ဘာလေး မရှိဘူးလား မမအတှကျ ယောငျးမခြောလေး တဈယောကျလောကျ ရှာပေး စကားပွောဖျောမရှိဘူး” “ဟငျး အမမောငျက စှံမှမစှံတာ” “အံမယျ လြှောကျပွော ငါ့မောငျကိုကွိုကျတဲ့သူတှေ အမြားကွီး ငါ့မောငျက ရုပျက ဖွောငျ့တော့ ကောငျမလေးတှကေ ကွှမှောပဲ ဟိုနကေ့ ငါ့မောငျနဲ့ အမ ဈေးဝယျ သှားတော မောငျလေးသာ သတိမထားမိတာ ဈေးထဲက ကောငျမလေးတှကေ ငါ့မောငျကို ကွညျ့ကွညျ့ နကွေတာ အမတောငျ အူတို တယျ။ ဟှနျး” “အံမယျ ဖွဈရ တယျ။ အမကိုလညျး ဈေးထဲက ကောငျလေးတှရေော လူကွိးတှရေော မကျြလုံး ကြှတျမတတျ ငေးနကွေတာ ဒေါသတောငျ ထှကျ တယျ။ ”
“ငါ့မောငျကပေါကျတတျကရပွောရော့မယျ ချချ” မမကသေီကား သူ့ပုခုံးကို လှမျးကိုငျရငျး ပွောလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ကိုယျဟနျ အနအေထား ပကျြသှားသောကွောငျ့ သူ့ဘကျကို ယိုငျသှားသဖွငျ့ ဖမျးထိနျး လိုကျရ တယျ။ မမကသေိရဲ့ ရငျညှနျ့လေးက သူ့ရငျဘတျကိုပငျ မထိတထိဖွဈသှားတော့ ရငျထဲမှာ တဒုတျဒုတျ ဖွဈသှားတာပေါ့ ကြေးဇူးရှငျ ဖွဈနလေို့သာပေါ့ နို့မို့ဆို ဟူး (၆) “ခြီးယားဈ” “ကဲ ကိုလငျးထကျရေ အလုပျကိစ်စတှပေဲ ပွောနတော ဒီတဈခေါတော့ ပြျောပြျောပါးပါးပေါ့” ဦးဇျောအောငျကား တျောတျောမူးနပွေီ ဦးဇျောအောငျတို့ကုမ်ပဏီသို့ အခကျအခဲ ရှိခြိနျတှငျ သူ ပံ့ပိုး ပေးထားခဲ့ရာမှ ယခုအခါ လုပျငနျးမြားမှ ငှပွေနျပျေါခြိနျ ရောကျလာသဖွငျ့ နလေ့ညျက သူ့ရုံးခနျးသို့လာပွီး ညနစေောငျး လာချေါမယျ ဟုပွောကာ ရုံးဆငျးခြိနျတှငျ လာချေါခွငျး ဖွဈသညျ။ စငျတငျတဈခုသို့ ရောကျရှိနခွေငျးဖွဈ၏။ ဦးဇျောအောငျက ခုနက စငျတငျမှ ကောငျမလေးကို ပနျးကုံး သှားစှပျပွီး ဆငျးလာခွငျး ဖွဈသညျ။ “ကိုလငျးထကျက ဒါမြိုးတှစေိတျမဝငျစားဘူးလား” သူခေါငျးယမျးပွမိသညျ။
“ကြှနျတျောလညျး တဈခါတဈရံ အပြျောပါ အိမျမှာက ကွငျသူနဲ့ သားနဲ့သမီးက ရှိသေး တယျလေ ခငျဗြား အိမျထောငျပွုသငျ့ပွီနျော ကိုလငျးထကျ စီးပှားရေးကလညျး အောငျမွငျ ရုပျကလညျး ဖွောငျ့ တယျ။ ယောင်ျကြားခငျြးတောငျ သိ တယျ။ ” “ဟာ ခငျဗြားကလညျး နောကျနေ ပွနျပွီ” “နောကျတာ မဟုတျဖူး ကိုလငျးထကျရဲ့ သွျော သိပွီသိပွီ ခငျဗြားမှာ ကသေီ တဈယောကျလုံး ရှိနတောပဲ ဟကျဟကျ” “ဗြာ မပွောကောငျးတာဗြာ သူက ကြှနျတေျာ့ ကြေးဇူးရှငျ ကိုကွိးရဲ့ ” “ကိုမောငျက ဆုံးပွီလဗြော ကသေီက ကြှနျတျောတို့သူငယျခငျြး အရငျးကွီး ကိုလငျးထကျရဲ့ ကြောငျးနဘေကျတှေ ကြောငျးတုနျးကလညျးလှ အခုလညျး လှတုနျး ကြှနျတျောတို့နဲ့ အသကျတူ ဆိုတော့ ခငျဗြားထကျ ၁၀နှဈကြျောလောကျ ကွီးမှာ မထငျရဘူး (၃၀)လောကျလို့ပဲ ထငျရ တယျ။. ခုထိ နောကျအိမျထောငျ မပွုသေးတာတာကွညျ့ ကိုမောငျဆုံးတာ (၂)နှဈလောကျရှိပွီ ခငျဗြား စောငျ့နတောနမှော”
“မဟုတျတာဗြာ” “ဟုတျတယျ။ ကိုလငျးထကျရေ သူက ကြှနျတေျာ့မိနျးမ သူဇာနဲ့ ဘျောဒါတှေ ခငျဗြား ရုံးသှားတဲအခြိနျဆို လာလညျပါ့ဗြာ သူဇာဆီကို ခငျဗြား အကွောငျး ပွောလိုကျတာမှ ကြုပျလညျး သူတို့ခငျြးပွောတာ ခိုးနားထောငျလို့ကွားတာ ဗြို ဟကျဟကျ” လငျးထကျကား အပွနျလမျးတှငျ ပြျောသလိုလိုဖွဈနေ၏။ ကားမောငျးရငျးပငျ ပြျောနသေညျ။ မမကသေီ၏။ အကွောငျးကိုတော့သိရပွီ။ ဦးဇျောအောငျက “ကိုလငျးထကျရေ မမနေဲ့နျော” ဟု သူ့ပုခုံးကို လကျဖွငျ့ပုတျရငျး သူ့အိမျရှထေိ့ လိုကျပို့ရငျးပွောသှား၏။ ခွံရှတှေ့ငျကား မမကသေီတဈယောကျ ထိုငျစောငျ့နသေညျ။ ဒျေါမွတို့ မိအေးတို့ကား အိပျပွီထငျ တယျ။ ခွံတံခါးကို လာဖှငျ့ပေးသညျ။
“ဟာ မမဒီအခြိနျထိ ဘာလို့စောငျ့နတောလဲ ကြှနျတျောခွံတံခါးသော့တဈခြောငျးအပိုရှိ တယျလေ” “ဟူး ငါ့မောငျကို စိတျပူလို့ပါကှယျ လာထမငျးစားရအောငျ” “မမ မစားရသေးဘူးလား” “ဟငျ့အငျး ငါ့မောငျမှပွနျမလာတာ” သူ့အနနှေငျ့လညျး ဆိုငျမှာ သောကျတာကမြားပွီး အစာကသိပျမစားခဲ့သဖွငျ့ ဆာသလို ဖွဈနသေညျ။ ကားပျေါက အဆငျးမှာ သိပျပငျမဟနျနိုငျ။ မမကသေီက “ဟှနျး လူဆိုးလေး သောကျခဲ့တာ မြားပွီ ကဲကဲ အမပုခုံးကို တှဲလိုကျ” မမကသေီက သူ့ကို သူမ ပုခုံးပျေါ လကျတငျပွီး တှဲချေါ၏။ ယိုငျနဲ့နသေော ခွထေောကျမြားက မဟနျခငျြ။ ဒါနဲ့ သူမကို ဖကျထားသလို ဖွဈနေ၏။ အိစကျနသေော မမ၏ ဂုတျသားလေးမြားကို ဖကျထားပွီး မမ၏ ရငျညှနျ့ကသူ့ကြောကို ကပျနေ၏။ “ကဲကဲ ကောငျဆိုးလေးကတော့မူးနပွေီ လာ” သူမက သံပုရာသီးတဈလုံးကို ခှဲပွီးအရညျမြားကို နားထဲလောငျးခပြေးပွီး တဈလုံးဖွငျ့ နားထငျကို လှိမျ့ပေး၏။ တျောတျောလေး အမူးပွသှေား၏။ “မမကြှနျတျောပွောစရာရှိ တယျ” “ဘာလဲမောငျလေးရဲ့” ကသေီက သံပုရာရနေောကျတဈခှကျ ထပျဖြျောနစေဉျ လငျးထကျက ပွောသောကွောငျ့ မေးလိုကျ၏။
“ဟိုလေ ဒိနမေ့ောငျလေး ဘာကွောငျ့ သောကျလာလဲ သိလား” “ပွောလေ မောငျလေးရဲ့” မမကသေီကား တဈဖကျသို့ လှညျ့ပွီး သံပုရာရညျ ဖြျောနသေဖွငျ့ မသိ။ “ဒီနကေ့ောငျမလေးဆီကအဖွရေလာ တယျ” (၇) ကသေီ ရငျထဲမှာ ဒုတျခနဲ ဖွဈသှား၏။ သံပုရာရညျ ဖြျောတာပငျ ရပျသှား၏။ ဝမျးနညျးစိတျမြားက တလိပျလိပျ တကျလာ၏။ “ဘယျကလဲ မောငျလေးရဲ့ ငါ့မောငျ ရှေးထားတာတော့ ခြောမှာပါ” အသံကို ထိနျးရငျး ပွောသျောလညျး အနညျးငယျတုနျခါနေ၏။ “နောကျတဈပတျကရြငျ အမနဲ့မိတျဆကျပေးမယျလေ” “အငျးလေ အမယောငျးမလေးကို ကွညျ့ရတာပေါ့ အမအတှကျလညျး အဖျောရပွီ” ကသေီကား ဝမျးနညျးမှုကို မထိနျးနိုငျတော့။ မကျြနှာက ပွီုတော့မညျ့မိုးလို ဖွဈနပွေီ။ လငျးထကျ မွငျသှားမှာလညျး စိုးသညျ။ ဒါကွောငျ့ “သွျော အမ ခွံတံခါးသော့ မခတျခဲ့ရသေးဘူး သှားခတျ လိုကျဦးမယျ” ဟုဆိုကာ တဈဖကျသို့ အမွနျလှညျ့ပွီး ခွံထဲသို့ သှကျသှကျ လြှောကျခဲ့၏။ မကျြရညျမြားက မထိနျးနိုငျတော့။ “ရကျစကျ တယျ မောငျရယျ” လငျးထကျကား မမကသေီနောကျမှ အသာ လိုကျခဲ့၏။ ခွံတံခါးနားကို မှီရငျး ငိုနသေော မမကသေီကား သူ့ကိုမမွငျ။ သူက မမကသေီအနောကျမှ သှားပွီး မမကသေီခါးကို လှမျးဖကျပွီး ဆှဲလှညျ့ လိုကျသညျ။
ရုတျတရကျ ဖကျခံလိုကျရသောကွောငျ့ ကသေီ လှနျ့သှား၏။ နောကျကို ကွညျ့တော့ လငျးထကျ မကျြနှာကပွုံးစိစိနဲ့ “မမ ဝမျးနညျးသှားလား မမစိတျကိုစမျးကွညျ့တာ မမကိုခဈြ တယျ ကောငျမလေး ဆိုတာ မမကို ပွောတာ” ကသေီကား ခုနက ဝမျးနညျးတာပြောကျသှား၏။ ဝမျးသာသဖွငျ့ မကျြနှာမှာ ပွုံးသှားသညျ။ အို ရှကျလှနျး သဖွငျ့ မကျြနှာကို လငျးထကျရငျခှငျထဲ ဖှတျထား လိုကျတော့သညျ။ “မကျြနှာမော့ပါဦး မမရဲ့ ရှကျပါ တယျနျော မမတဈယောကျ စတာကို မသိဘူး ဝမျးနညျး သှားလိုကျတာ ကြှနျတျောက ကိုဇျောအောငျပွောပွလို့ မမ သူ့မိနျးမ မသူဇာအိမျ အလညျသှားရငျ ကြှနျတေျာ့အကွောငျး မသူဇာကို ပွောပွဦးမယျ” “အို ရှကျလိုကျတာ သူဇာကတော့ သှားမှရနျကို တှေ့ဦးမယျ အစုတျပလုပျမ” ကသေီကား ရှကျလှနျးသဖွငျ့ မကျြနှာပငျမဖျောနိုငျ။
အပြိုဖနျြးလေးလို ဖွဈနသေညျ။ စိတျထဲကတော့ သူဇာဆိုတဲ့ သူငယျခငျြးမကို နောကျတဈခါ သှားလညျမှ လကျဆောငျ ကောငျးကောငျးတှေ ဝယျပေး လိုကျဦးမညျဟု တှေးနေ လတေော့သညျ။ (၈) “ကဲ ကိုလငျးထကျရေ သှားပွီဗြို့” အိမျ ပေါကျဝထိ သူ့ကို လိုကျပို့ပွီး ကိုဇျောအောငျတို့ ပွနျသှားကွပွီ။ ခါတိုငျး ဒီလိုပွနျနကြေ ဖွဈသျောလညျး ဒီနအေ့ဖို့တော့ စိတျထဲမှ တထိတျထိတျ ခုနျနေ၏။ မနကျခငျးက မင်ျဂလာဆှမျးကြှေး၊ ရုံးတကျလကျမှတျထိုးပွီးတော့ ညနစေောငျးတှငျ ကိုဇျောအောငျတို့ အုပျစုက ခဲဖိုးဆိုပွီး သတို့သား ကိုယျတိုငျ လိုကျတိုကျရမညျ ဆိုသဖွငျ့။ “မောငျလငျးထကျရေ ကသေီက လာခဲ့တော့တဲ့ လကျဆောငျထုပျတှေ ဖောကျကွညျ့ရအောငျ ဆိုလား” ဒျေါမွမကျြနှာကလညျး ပွုံးစိစိ သူပငျ ရှကျသလို ဖွဈသှားသညျ။
ခါတိုငျး အိမျ အပျေါထပျကို တကျလြှငျ သှကျသှကျလကျလကျ ဖွဈသျောလညျး ယခုက ခွထေောကျမြားပငျ အနညျးငယျ တုနျနသေညျ။ အိမျ အပျေါထပျက မမရဲ့ အခနျးထဲမှ ပွငျဆငျထားသော နှဈယောကျအိပျ ကုတငျကွီးပျေါမှ မမကသေီကား စောငျ့နရေော့မညျ။ ခါတိုငျး မောငျနှမလို သဘောထားပွီး နခေဲ့စဉျက ဘာမှမဖွဈ။ ယခု လငျမယားလို နရေတော့မညျဆိုတော့။ “မမကြှနျတျောပွနျလာပွီ” “ဝငျခဲ့လမေောငျ” မောငျတဲ့ အချေါက ပွောငျးသှားပွီ။ ရငျထဲမှာ ကွညျနူးမိသညျ။ မမက ညအိပျဝတျစုံ ဝတျထားသဖွငျ့ ရငျသားလေးမြားပငျ ပျေါနသေညျ။ ခွသေလုံးလေးမြားက ဆငျစှယျလိုပငျ ဖွောငျ့စငျးနေ၏။ မမက ခေါငျးကို ငုံ့နေ၏။ ရှကျသညျ ထငျသညျ။ သူ မမပါးကို ရှတျကနဲ့ နမျးလိုကျသညျ။ “အိုမောငျရယျ” ကသေီက ခဈြသော မောငျ၏ အနမျးကို အနမျး ခပျကွမျးကွမျးလေး ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျလိုကျ၏။ မောငျ့ကို ကုတငျပျေါဖကျရငျး လှဲခလြိုကျသညျ။ သူမအနဖွေငျ့ အတှအေ့ကွုံ ရှိပွီးသားဖွဈသောကွောငျ့ မောငျ့လို လူပြိုရိုငျးလေးကို ဘယျလို ကိုငျတှယျရမညျကို သိနသေညျ။
သူမကိုယျတိုငျ ဦးဆောငျပွီး ပညာကုနျ သငျပေးခှငျ့ကို ပိုငျပိုငျကွီး ရပွီလေ။ ညဝတျစုံကို ခြှတျလိုကျသော အခါမှာတော့ သူမတဈကိုယျလုံး မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျး ဖွဈသှား၏။ မောငျ့ကို ပကျလကျလှနျပွီး အပျေါမှ နှုတျခမျးခငျြး တစေု့ပျကာ တဈဖကျမှ မောငျ့ပုဆိုးကို လြှောခလြိုကျ၏။ မောငျ့ရဲ့ပစ်စညျးကို လကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျလိုကျတော့ မောငျ့ပါးစပျမှပငျ အဟငျးဟငျး အသံထှကျလာ၏။ “မောငျ မောငျ့ညာဖကျလကျက မမခါးကိုကိုငျထား တဈဖကျကမမနို့တှကေိုကိုငျ ငါ့မောငျကို သငျပေးတော့မယျ ချချ” မမကသေီ၏ ကိုယျလုံး အလှကား အခနျးထဲမှာ မီးထှနျးထားသဖွငျ့ လငျးထကျအဖို့ အပွညျ့အ၀ မွငျရတော့သညျ။ မမနို့နှဈလုံးကား ပနျးရောငျပွေးနပွေီး ဆံပငျမြားက နို့အပျေါ ဝဲကနြသေဖွငျ့ သူ့ငပဲကား မာတောငျနအေောငျပငျ ဖွဈလာ၏။ မိနျးမနှငျ့ သူ ဘယျလို လုပျရမှနျးမသိ။ မမကသေီ ခိုငျးသညျ့အတိုငျး သူ့ကို ပကျလကျလှနျပွီး ခှထားသော မမကသေီ၏ နို့ကို တဈဖကျက ညဈပွီး နို့သီးလေးကို ခပြေေးနေ၏။
မမကသေီ၏ စှငျ့ကားနသေောတငျသားမြားကို လကျတဈဖကျက ကိုငျလိုကျသောအခါ မမကသေီက ဖငျကို အနညျးငယျ ကွှကာ သူ့လီးကို ဘယျလကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျ လိုကျ၏။ သူ့လီးကား ငရံ့အရှငျတဈကောငျ ငါးမွှားခြိပျမှာ မိနသေလို တဆတျဆတျ တုနျခါနပွေီး အရညျကွညျလေးမြား စိမျ့ထှကျ နပွေီဖွဈသညျ။ “ချချ မောငျ့ကောငျလေးကလညျး မောငျ့လို လူဆိုးလေးပဲနျော ကွညျ့ ထိနျးမရခငျြဘူး ဒီတော့ ငွိမျသှားအောငျ” မမကသေီကား မထငျရ။ တဈခါ အိုပွီးသားမို့လား မသိ။ အပွောအဆိုတှကေ ရဲတငျးလှ၏။ ကသေီအဖို့မှာတော့ ခဈြသောမောငျ၏ ကောငျလေးကို လကျဖွငျ့ကိုငျပွီး အဖုတျဝတှငျ တကေ့ာ ထိပျဖြားလေးကို ပှတျဆှဲပေးနေ၏။ မောငျ့ထံမှ အသကျရှုသံတှေ ပွငျးလာသညျ။
မောငျ့လီးက ဆုံးသှားသာ သူ့ကိုကွီးလီးထကျ ကွီးသညျ။ သူမလကျထဲတှငျပငျ ခနျ့မှနျး ၅လကျမကြျော ၆လကျမနီးနီးဟု ထငျသညျ။ ကပျြလုံးခနျ့ တုတျသညျ။ လူပြိုလေးမှနျးတော့ သိသာသညျ။ လီးထိပျမှာ အရပွေားလေးတှပေငျ ဖုံးနသေေး၏။ ခဈြလှစှာသော မောငျ့ရဲ့ လီးကိုကိုငျကာ သူမအဖုတျထဲသို့ သူမကိုယျတိုငျ ကိုငျတကေ့ာ ဖွညျးဖွညျးခငျြး သှငျးလိုကျခြိနျတှငျ မောငျမကျြလုံးတှေ မှိတျသှား၏။ အောကျမှ ကော့ကာ တကျလာတာကို တှေ့၏။ လကျတဈဖကျက ခါးကို ကိုငျထားရာမှ နောကျနို့တဈလုံးပျေါ လကျ ကိုငျလိုကျသဖွငျ့ နို့နှလုံးစလုံးကို မောငျ ညဈလာတာကို သတိထားမိသညျ။ သူမ လကျနှဈဖကျက မောငျ့ရငျဘတျပျေါ ခပျဖှဖှထောကျရငျး အဖုတျထဲစိုကျထားသော လီးကို ခပျသှကျသှကျလေး ဆောငျ့ပေး နလေိုကျ၏။ လူပြိုစဈစဈလေးမို့ ထငျသညျ။ လီးကတော့ သံခြောငျးသဖှယျ မာနပွေီး အဖုတျထဲမှာ ကပျြနသေညျ။ “ဖှတျဖှတျ ပလှတျပလှတျ” မောငျ့ လဥနှငျ့ သူမဆီးခုံ ရိုကျသံက စညျးခကျြမှနျမှနျ အခနျးထဲမှ ထှကျလာသညျ။
သူမ စောကျခေါငျထဲမှ ထှကျလာသော အရညျကွညျလေးမြားနှငျ့ မောငျ့လီးထိပျမှ ရှပွေ့ေးထှကျလာသော အရညျကွညျလေးမြား ပေါငျးကာ အသံ ထှကျလာခွငျးဖွဈသညျ။ လငျးထကျကားအောကျမှနပွေီး သူ၏ လူပြိုစဈစဈလီးလေး မမ၏ အဖုတျထဲစိုကျဝငျသှားခြိနျတှငျ ခံစားရသော အရသာကိုတော့ သူ့တဈသကျ မမနေို့ငျတော့တာအမှနျ။ ခဈြလှစှာသော မမ၏ ဦးဆောငျမှု အောကျမှာ သူမိနျးမောနသေညျ။ ကိုဇျောအောငျက ဘကျခလြာနိုကျ သှားလုပျစဉျ သူ့အရကျထဲမှာ ဆေးတဈမြိုး ထညျ့ပေးလိုကျသညျ။ ဘာဆေးမှနျးတော့မသိ အဲ့လိုလုပျရငျကွာ တယျ။ ခှနျအားအပွညျ့ပဲ ဟုပွောသညျ။ သူလညျး သောကျခဲ့သညျ။ ဒါကွောငျ့ ထငျသညျ။ သူ မထှကျနိုငျသေး မမလို ဝါရငျ့သမားက သူ့ကို ဦးဆောငျမှာပဲ ဟုပွောလိုကျတာ တကယျမှနျသညျ။
မမကား ကိုကွီးနှငျ့ ကလေးမရခဲ့သဖွငျ့ထငျသညျ။ မမ အပေါကျလေးက အပြိုလို ကဉျြးနသေညျ။ သူ့၏ အကွော တပွီုငျးပွိုငျးနှငျ့ ထောငျထ နသေော လီးကွီးက မမ စောကျခေါငျး ကွပျကွပျလေးထဲ ဝငျသှားသောအခြိနျတှငျ မမ၏ ပနျးနုရောငျ စောကျပတျ နှဈခွမျးက သူ့လီးကို ညှပျညှပျပွီး ဆှဲယူနသေညျ။ အခကျြ လေးငါးဆယျခနျ့ ဆောငျ့ပွီးခြိနျတှငျတော့ သူ့လီး ထိပျဖြားက ကဉျြလာသလို မမကသေီ ဆောငျ့ခကျြတှကေလညျး ပိုသှကျလာ၏။ ပွှတျပွှတျဘုတျဘုတျ အားအား အငျးအငျးဟငျးဟငျး။ ညဉျးသံမြား ပွီုငျတူ ထှကျလာပွီး မမကသေီကား စောကျရညျမြား ပနျးထှကျကာ တဈခြီပွီးသှားသလို သူ့လီးထဲမှ လရမြေားကို ခဈြလှစှာတော မမ၏ စောကျခေါငျး အတှငျးသို့ ပနျးထုတျ လိုကျလတေော့သညျ။ ကသေီကား တဈခြီထှကျပွီးနောကျ အနညျးငယျ မောသှားသညျ။ လငျးထကျကို နှုတျခမျးခငျြး တပွေီ့း နမျးလိုကျပွီး “မောငျ့ကို မမသိပျခဈြတာဘဲ သိလား” “မောငျလညျး မကို အရမျးခဈြ တယျ။
ကိုကွီးမရှိတော့တဲ့ အခြိနျမှာ ကိုကွီးကိုယျစား မမဘဝကို စောငျ့ရှောကျခှငျ့ ရတဲ့အတှကျလညျး အရမျးပြျော တယျ။” “ဟှနျး စောငျ့ရှောကျတာကွီးကလညျးနျော ချချ” “ဘာလဲ မမကမကွိုကျလို့လား” “ဟငျးမောငျနျော” မမကသေီကား အနညျးငယျ ရှကျသှားသညျ။ “အဟဲ ကြှနျတျောက စတာပါ မမကို” “သိပါ တယျ မောငျရယျ” “ဟငျးပွောမို့သာ ပွောရတာပါ မမက အိုပွီးသား ဆိုတော့ ငါ့မောငျက ပဈသှားမှာကို မမစိုးရိမျမိ တယျ။ ငါ့မောငျကလူပြိုလေ ပွီးတော့ ရုပျကလညျး ခြောတော ကောငျမလေးတှကေ စိတျဝငျစား ကွတယျ။” ဒီလို ပွောလာတော့ မမကသေီကို လငျးထကျသနားမိသညျ။
မမကသေီကား အားငယျ နရှောသူပငျ။ “အိုမမရယျ ဒါမြိုးစကား နောကျ မပွောပါနဲ့” “ကြှနျတျော မမကိုခဈြလို့ လကျထပျခဲ့တာပဲ မမကသေီက အရမျးလှတော့ မမကို ဆုံးရှုံးရမှာကို ကြှနျတျော အရမျးကွောကျခဲ့တာ မမကို ကြှနျတျော ဘယျတော့မှ ပဈမသှားဘူး သိလား” ဒီလို ပွောလာတော့လညျး ကသေီရငျထဲ ကွညျနူး သှားတာပေါ့။ သွျော ခဈြရတဲ့မောငျရယျ မငျးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ရတာနဲ့တငျ မမဘဝက သပြေျောပါပွီဟု ရငျထဲကနေ ပွောနမေိ တယျ။ ထိုသို့ပွောနတေဲ့ အခြိနျမှာတငျ ကသေီရဲ့ပါးကို မောငျက နမျးနေ တယျ။ အို လညျဂုတျသားလေးတှကေိုပါ လိုကျနမျးနတေော့ ကသေီ အနရေ ခကျလာပွနျ တယျ။ မောငျ အငျးဟငျးဟငျး ။ လငျးထကျက လညျဂုတျကနေ လြှောဆငျးပွီး ကသေီရဲ့နို့တှကေို စို့ပေးနပေါ တယျ။ ကသေီရဲ့ ဖွူဝငျးပွီး ပနျးရောငျ ပွေးနတေဲ့ နို့သီးထိပျလေးတှကေို စုပျပေး နတောကွောငျ့ ကသေီ တဈယောကျ ခါးခြိုး ခံရတဲ့ မွှတေဈကောငျလို တှနျ့လိမျ နပေါ တယျ။ ပွီးတော့ ဗိုကျသား ဖွူဖွူဝငျးဝငျး လေးတှကေို လိုကျနမျး နပေါ တယျ။ “အို မောငျယား တယျ။
ခိခိ” လငျးထကျလညျး မမကသေီရဲ့ ရှရေောငျအမှေးနုလေးတှနေဲ့ လိမျကောကျနတေဲ့ ရတနာလေးကို မကျြနှာ အပျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ မမကသေီက သူ့ခေါငျးကို တှနျးလိုကျပါတယျ။ “အို မောငျမလုပျနဲ့ မောငျ ဘုနျးနိမျ့ ကုနျလိုကျမယျ မမငရဲကွီးကုနျမယျ” “အို မမကလညျး ခဈြလို့ လုပျပေးတဲ့ဟာကို” ကသေီရငျထဲကွညျနူးသှားပါ တယျ။ ကိုမောငျတုနျးကတောငျ တဈခါမှ သူမကို ဘာဂြာ မမှုတျပေးဘူးပါဘူး သူ့မှေးစားညီ လငျးထကျနဲ့မှ ခံစားရတော့တယျ။ လငျးထကျလဲ ခဈြလှစှာသော မမကသေီရဲ့ ပိပိလေးကို ပါးစပျနဲ့တပွေီ့း သခြောမှုတျပေးပါတယျ။ ဒါမြိုးတှကေ ဇာတျကားတှထေဲမှာ မွငျနကေပြမေဲ့ အခုမှ လကျတှစေ့မျးသပျခှငျ့ ရတာပါ။.
“ရှီး အ အ မောငျ ယား တယျ။ မလုပျနဲ့တော့ မမမခံနိုငျဘူး မောငျ့ဟာန လုပျပေးတော့” လငျးထကျ မှုတျတာနားတဲ့အခြိနျမှာ သူ့လီးကလညျး အစှမျးကုနျ ထောငျနပေါပွီ။ မမကသေီက “ဒီတဈခါပုံစံ ပွောငျးရအောငျမောငျ မောငျ ကုတငျအောငျဆငျးပွီး မတျတပျရပျလိုကျ မမက ကုတငျပျေါ ကုနျးပေးထားမယျ” လငျးထကျ ကုတငျအောကျဆငျးပွီးတဲ့အခါမှာ မမကသေီက ကုတငျပျေါမှာ လေးဖကျ ထောကျပေးထားပါ တယျ။ မမကသေီက လငျးထကျရဲ့လကျနှဈဖကျကို သူမ ခါးကို ကိုငျခိုငျးထားပါ တယျ။ “မောငျ ဒါမှစညျးခကျြညီမှာ မောငျ သှကျသှကျစိတျကွိုကျလုပျလို့ရမှာ” မမကသေီရဲ့ ကုနျးထားတဲ့ဖငျက လုံးဝနျးနတောပါ ခါးက သိမျတဲ့အတှကျ တငျပါးတှကေ စှငျ့ပွီးကားထှကျပွီး ရမကျကွှစရာ ဖွဈနတောပါ။ ဒါကို အအိုပါလို့ တဈခွားသူမွငျရငျ ယုံမှာ မဟုတျကွပါဘူး။
ကသေီကား ကုတငျပျေါမှာ လေးဖကျထောကျ အနအေထားပွီး မောငျက မတျတပျ ရပျထားတာမို့ မောငျ့ရဲ့လီးဟာ ကသေီကုနျးထားတဲ့ အဖုတျနဲ့ တနျး နတောပါ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ မောငျက လုပျတာကြှမျးကငျြလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ မောငျ့လီးကို ကသေီရဲ့ နောကျမှပွူထှကျနတေဲ့အဖုတျလေးကို ထိုးထညျ့ လိုကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ကသေီရဲ့ ပနျးရောငျအဖုတျ နှဈခွမျးက ဟသှားပွီး မောငျ့လီးကို ကသေီက ညဈပေး နသေလို ဖွဈနတောကွောငျ့ မောငျ့ အဖို့လဲ တဟငျးဟငျး ဖွဈနပေါ တယျ။ “မောငျ ဆောငျ့တော့လေ” လငျးထကျဟာ မမကသေီရဲ့ ခါးကိုကိုငျပွီး သူ့ လီးလေးကို မမကသေီ အဖုတျထဲ ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျ လုပျလာပါ တယျ။ ပထမတော့ ဖွညျးဖွညျးလေး လုပျနတောမို့ မောငျ မမကိုမညှာပါနဲ့ ကွမျးကွမျးဆောငျ့ လို့ ပွောလိုကျတဲ့ အခါမှာ လငျးထကျဟာ မမကသေီခါးနှဈဖကျကို အားရပါးရကိုငျပွီး အသားကုနျ ဆောငျ့ပါတော့ တယျ။
ဘှတျဘှတျဘတျဘတျ ။ အားဟငျး အိုအိုး မမကသေီဟာ နှုတျခမျးကို ပွတျလုမတတျ ကိုကျထားပွီး လငျးထကျရဲ့ ဆောငျ့ပေးတာကို အားရပါးရ ခံနပေါ တယျ။ ဟှနျး သူ့အကိုကွီးထကျ ဆောငျ့အား ကောငျးတယျ။ မွနျနတောပဲ လို့ တှေးမိ တယျ။ လငျးထကျ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး မမကသေီထံမှ တအငျးအငျးညညျးသံတှေ ထှကျပျေါနသေလို သူ့ ဥတှဟော မမကသေီရဲ့ ဖငျနှဈခွမျးကို သှားသှားရိုကျပါ တယျ။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဥနဲ့ဖငျနဲ့ ရိုကျသံကလညျး တဈဘတျဘတျနဲ့ ထှကျပျေါနသေလို ကုတငျကွီးကလညျး တကြီကြီနဲ့ အသံထှကျ နပေါ တယျ။ မမကသေီရဲ့ အဖုတျလေးထဲက သှေးကွောမြှငျလေးတှဟော လငျးထကျ လိငျတံကွိးကို ညှဈညှဈ ပေးနတောကွောငျ့ လငျးထကျ အဖို့တော့ နတျပွညျ ရောကျသလိုပေါ့။ သူ့အနနေဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈနှဈလောကျကဆို မမကသေီကို ဒီလိုလုပျဖို့မပွောနဲ့ ကိုယျ့ကြေးဇူးရှငျမိနျးမ ဆိုပွီး စိတျနဲ့တောငျ ပဈမှားခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကိုကွီးဦးမောငျ ဆုံးသှားပွီးတဲ့ နောကျမှ သှေးမတျော သားမစပျတဲ့ သူတို့မောငျနှမဟာ စိတျတှဖေောကျပွနျလာပွီး ဘင်ျဂလားမောငျနှမ ဖွဈသှားကွတာပေါ့။
ကသေီကလညျး အရှယျကောငျးမုဆိုးမ။ လငျးထကျကလညျး လူပြိုရိုငျးလေး။ သံယောဇဉျအခံကလညျးရှိ ဆိုတော့ လငျမယား ဖွဈသှားကွတာ မဆနျးပါဘူးလေ။ လငျးထကျက နောကျထပျ အခကျြ(၃၀)လောကျ ထပျဆောငျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှ မမကသေီအဖုတျက သူ့လီးကို အတငျးညဈထုတျပွီး မမကသေီရဲ့ ညှဈအားက လြှောသှားပွီး သူမရဲ့အဖုတျထဲမှ အရညျတှေ ထှကျလာသလို လငျးထကျ လီးထဲမှလညျး လရတှေေ ပနျးထှကျပွီး နှဈယောကျသား မောမောပနျးပနျးနဲ့ ကုတငျပျေါကို ထပျလကျြသား လဲကြ သှားကွပါတော့ တယျ။ (၉) မနကျခငျးလေးမှာ ကသေီဟာ အရငျနိုးလာခဲ့ပါတယျ။
ဘေးမှာ မောငျကတော့ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျမောကနြပွေီး မကျြနှာလေးက အပွဈကငျးစငျနပေါတယျ။ မနကျ (၄)နာရီလောကျမှာ မောငျက တဈခါထပျလုပျတာကို တှေးမိပွီး ကသေီ ပွုံးလိုကျမိ တယျ။ အရူးလေးကို အမဲသားကြှေးမိသလိုပဲ။ ဟငျး လူဆိုးလေး ။ မောငျ့ရဲ့နဖူးလေးကို ကသေီက ခပျဖှဖှလေးနမျးလိုကျပွီး မောငျမနိုးအောငျ အိပျယာမှ အသာ ထလာခဲ့ပါ တယျ။ အောကျမှာ အိမျကထမငျးခကျြ ဒျေါမွနဲ့ အိမျဖျောမလေး မိအေးတို့ကတော့ နိုးနပေါပွီ။ “ဒျေါလေးမွရေ မောငျ့အတှကျ ကျောဖီဖြျောပွီးဓါတျဘူးထဲထညျ့ထားလိုကျတော။ မိအေးရေ နငျ့အကို အတှကျ ပေါငျမုနျ့နှဈခပျြ မီးကငျပွီး ကွကျဥနှလုံး မကကျြတကကျြကွျောထားနျော” ကသေီကား တစာစာ မှာနပေါတယျ။
“ဟငျးဟငျး အဖွဈသဲနလေိုကျတာသမီးရယျ ကွီးမွသိပါ တယျ။ မောငျလငျးထကျကို တျောတျောခဈြတနျးလညျး မသိဘူး ရှကျလိုကျတာ” ကသေီတဈယောကျညကအဖွဈကိုစဉျးစားမိပွီး ရှကျရှကျနဲ့ မကျြနှာလေးရဲတှတျပွီး ထမငျးစားခနျးထဲက ထှကျခဲ့ တယျ။ ညက အရှကျကုနျခဲ့ပမေဲ့ မနကျရောကျတော့ ရှကျတာပေါ့လို့။ “ချချ ကသေီရေ ခလုပျလဲ တိုကျနဦေးမယျ” ဒျေါလေးမွက ဒါတောငျလှမျးစဖွဈအောငျ စလိုကျပါသေး တယျ။ ကိုကွီးနဲ့ မင်ျဂလာ ဆောငျခဲ့တုနျးကတောငျ မရှကျဖူးပါဘူး ကိုကွီးဆုံးလို့ သူ့မှေးစားညီ လငျးထကျနဲ့ယူမှပဲ သူမ ရှကျသလိုလို ဖွဈနသေညျ။ ညကအဖွဈတှကေို စဉျးစားမိရငျး ဧညျ့ခနျးထဲက ဆိုဖာမှာ ထိုငျရငျးစဉျးစားနတော။ အို ရှကျလိုကျတာ ညကသူမအရှကျနညျးခဲ့ပမေဲ့ အခုကတြော့ ရှကျသှေးလေးတှေ တကျနသေညျ။
တကယျတော့ မောငျ့ကို သူမ ခဈြလှနျးလို့ ဖွဈခဲ့ရတာ မဟုတျလား။ အပြိုမဟုတျပမေဲ့ သူမခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို လငျးထကျကို ပုံအပျခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျလညျး အကနြေပျကွီး ကနြေပျမိ တယျ။ “ပွောပါစေ လူတှေ ဝိုငျးပွောပါစေ သိပျခဈြလှနျးလို့ မောငျ့နောကျလိုကျခဲ့မယျ ကြှနျမကို မောငျသကျဆုံးတိုငျ မဆုံးတဲ့ အခဈြနဲ့ အမွဲတမျးခဈြနပေါ” ဖုနျးသံကွောငျ့ အတှေး ဝငျနသေောကသေီ လနျ့သှားသညျ။ “စောစောစီးစီးဘယျသူပါလိမျ့” သူမသူငယျခငျြးသူဇာဆီက။ ဟငျး နောကျတော့မယျ။ မကိုငျမခငျြးချေါမှာ သိတာကွောငျ့ “ဟဲလို သူဇာ ကောငျမစုတျ လနျ့သှားတာပဲ ပွော စောစောစီးစီး” “အမလေးဟဲ့ ချေါမိတာကိုက ငါ့အမှား ဖွဈရ တယျတကယျပဲ နငျမြား ဂိုးသှငျး ခံနရေတုနျးလား လို့ ဟဲ” “အိုရှကျလိုကျတာ” သူဇာကပွနျအျောတာကွောငျ့ သူမရှကျသှား သေးသညျ။
“ဘယျလိုလဲ ညက နငျ့မောငျလေး ဂိုးသှငျးကောငျးရဲ့လား” “အို ရှကျ တယျ” “အံမယျ နငျကပဲရှကျရတယျ ရှိသေး။ မသကာနငျ့ မောငျလေးက ရှကျတယျဆို တျောသေး။ ကောငျမနျော။ နငျ့အကွောငျး ငါသိတယျ ဟငျးဟငျး” “နငျက ရှတတနဲ့ အိုကလညျး အိုပွီးသား ဆိုတော့ နငျ့မောငျလေးကို လကျကုနျ သငျပေးလိုကျရဲ့လား” သူဇာ အပွောတှကွေောငျ့ ကသေီလညျး ရှကျရှကျနှငျ့ပငျ “ဟုတျ တယျ။ ကောငျမရဟေုတျ တယျ။ ငါ့ခဈြသော မောငျလေးကတော့ ပြော့ဖတျသှားတာပဲ” “ဒါနဲ့ နငျ့ပေါငျတှေ တငျပါးတှေ ရောနာနရေော ဆိုပါတော့” “ဟငျး သူဇာနျော ဘာတှမှေနျးမသိဘူး ရှကျတယျ။ ရှကျ တယျ။ နငျ့အိမျ လာလညျမှ မေးတော့ သိပွီလား” ဟုဆိုကာ ကသေီဖုနျးကို ခလြိုကျပါတော့ တယျ။
လငျးထကျ နိုးလာတဲ့ အခြိနျမှ မမ အခနျးထဲမှာ မရှိတော့ပါဘူး ညကမမနဲ့ ခဈြတမျး ကစားတာမြားလို့ ကိုယျတှေ နညျးနညျးနာနေ တယျ။ ဒါနဲ့ မကျြနှာသဈဖို့ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျလာတဲ့အခါမှာ မမကရခြေိုးပွီးစ သဘကျလေးနဲ့ သူမဆံပငျတှကေို ပွူတငျးပေါကျနားမှာ သုတျနတောကွောငျ့ သူလာတာ သတိမထားမိပါဘူး။ မမကသေီဟာ ထမိနျရငျလြားလေးနဲ့ ဖွဈနတောကွောငျ့ သူ့ရငျခုနျသံတှေ မွနျသှားပါ တယျ။ ဒါနဲ့ သူလညျး မမကသေီနောကျဖကျကနသှေားပွီး မမကသေီရဲ့ ခါးကဉျြကဉျြလေးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ နောကျကနေ ဖကျ လိုကျပါတယျ။ “အို အမေ့ မောငျရယျ လနျ့သှားတာပဲ” “ညကတော့ မလနျ့ဘူးနျော” မမကသေီ မကျြနှာလေး ရဲသှားပါ တယျ။ “သှား လူဆိုးလေး ဘာတှမေေးမှနျးမသိဘူး မကျြနှာ သဈခတြေော” သူလညျး မမကသေီနဖူးကို ခပျဖှဖှလေး နမျးလိုကျပါတယျ။ မမကသေီက “မောငျ ကျောဖီသောကျဖို့ ပွငျပေးထားပွီးပွီ ပွီးတော့ မောငျရုံးသှားရငျဝတျဖို့ ပုဆိုးနဲ့အင်ျကြီနဲ့ အခနျးထဲက အဝတျစငျပျေါမှာ မီးပူထိုးပွီး ဖွနျ့ပေး ထားတယျ။” “ဟုတျပါပွီမမရယျ ဒါကွောငျ့ မမကိုခဈြတာ သိလား” “သှား အာပုတျစျောနံ တယျ။” ကသေီက ဒီလိုသာ ပွောနတောပါ ခဈြသောမောငျရဲ့ ပှဖေ့ကျမှုကို အမွဲတမျး ခံခငျြနတောပါ မောငျရယျဟု စိတျထဲမှ တိုးတိုးလေး ပွောနမေိပါ တယျ။
(၁၀) သူဇာကား ကွညျ့ရငျးနှငျ့ပငျ ဖီးလျတကျနသေညျ။ နလေ့ညျက ကသေီ လာလညျသှားသညျ။ ကသေီနှငျ့သူမကား ငယျသူငယျခငျြးတှဆေိုတော့ ပွောမနာဆိုမလာတှလေေ။ ဟိုနကေ့ ကသေီနဲ့ သူ့အရငျယောင်ျကြား ကိုကွီးမောငျတို့ ညီမောငျ ကသေီ ဘင်ျဂလားမောငျလေး လငျးထကျနဲ့ နောကျအိမျထောငျ ပွုသှားသော ကသေီက သူမ မင်ျဂလားဦးညက အခနျးထဲမှာ သူ့မောငျ မသိအောငျ မကျြနှာကကျြပျေါမှာ ဖုနျးကိုတိပျနဲ့ကပျပွီး ရိုကျထားတာ တဲ့လေ။ မီးအလငျးရောငျကလညျး ထငျးနတောကွောငျ့ သူမတို့လငျမယား ဘယျလို လုပျသညျ ဆိုတာကို သူဇာကို လာကွှား သှားခငျြးဖွဈသညျ။ သူဇာအဖို့ လငျးထကျက ကသေီကို လုပျပုံတှကေို ကွညျ့ပွီး သူမပငျ ကသေီနရောမှာ အစားထိုး ဝငျခငျြစိတျတှေ အရှငျလတျလတျ ဖွဈပျေါသှားသညျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးထဲသို့ ဖိုငျကိုကူးထားပွီး ပွနျကွညျ့ နခွေငျးဖွဈသညျ။ သူမ သားနှငျ့သမီးက ကြောငျးသှားကွပွီ။
ကိုဇျောအောငျကလညျး ယခုနှဈပိုငျးမြားတှငျ အိမျထောငျသကျ ကွာလာ သောကွောငျ့လားမသိ။ ညအိပျရငျတောငျ မလုပျဖွဈတဲ့ ရကျတှကေ မြားနပွေီ။ ဒါကွောငျ့မို့ သူမမှာကလညျး အသကျ(၄၀)ခနျ့ သှေးသား ဆူဖွိုးဆဲအရှယျ ဆိုတော့ ဒီလို ကှကျကှကျကှငျးကှငျး ရိုကျထားတာကို မွငျတော့ ကာမစိတျတှေ ထကွှလာသညျ။ သူမ စိတျထဲကတော့ ဖွဈနပွေီ သူ့ယောင်ျကြား ကိုဇျောအောငျနဲ့တော့မဟုတျ လငျးထကျနဲ့ အလုပျခံခငျြနတော ဖွဈသညျ။ ကသေီကို လေးဖကျထောကျပွီး ဆျောသောအခနျးမှာ အပျေါမှ ရိုကျထားသဖွငျ့ ကသေီအပေါကျထဲကို လငျးထကျရဲ့ ပစ်စညျးကွီး ဝငျနတောကို တှနေ့ရေတော့ ကွညျ့ရုံနဲ့ပငျ လငျးထကျပစ်စညျးက သူမယောင်ျကြား ကိုဇျောအောငျထကျ ကွီးတာကို တှနေ့ရေသညျ။
သူဇာ နမေကောငျးဘူးကွားသဖွငျ့ ကသေီကား သူဇာအိမျကို သှားသောအခါ အပျေါထပျမှာဟု ဆိုသဖွငျ့ အိမျအပျေါထပျ တကျခဲ့သညျ။ ကိုဇျောအောငျက အလုပျသှားပွီနမှော မိနျးမ နမေကောငျးတာတောငျ ဂရုမစိုကျတဲ့လူပဲ။ “သူဇာရေ သူဇာ” “ဝငျခဲ့တော့ ကသေီရေ” အခနျးထဲက ကုတငျပျေါမှာ သူငယျခငျြးမ သူဇာက ခှခှေလေေးလဲနသေညျ။ “နငျ ဘာဖွဈနတောလညျးသူဇာ ဆေးခနျး မသှားဘူးလား” “အငျး ငါမပွောခငျြပါဘူးဟာ ငါ့ရောဂါက ဆေးထိုးလညျး ပြောကျမှာမဟုတျပါဘူး” ကသေီကား အံသွသှားသညျ။ “နငျကလညျး စိတျဓါတျကတြဲ့ စကားတှမေပွောပါနဲ့ ကဲ နငျဘာဖွဈနတောလညျး ပွော ငါကူညီနိုငျရငျ ကူညီမှာပေါ့” သူဇာကား မကျြနှာလေး ဝငျးလကျ သှားပွီး “နငျ တကယျကူညီမှာလား ကသေီ” “တကယျပါ ငါကတိပေး တယျ” “အဲ့ဒါဆိုရငျ ငါပွောပါ့မယျဟာ” “အဓိက တရားခံက နငျပဲကသေီ နငျလေ လငျးထကျနဲ့ မင်ျဂလာဦးညက ရိုကျထားတဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျကို ငါ ကွညျ့ပွီး ကတညျးကလေ ငါ ငါလေ နငျ့မောငျကို xxx ဖွဈသှား တယျ။ ငါမနနေိုငျဘူးဟာ ရူးလိမျ့မယျ။
ဟငျ့ဟငျ့ အီးဟီးဟီး နငျမကူညီနိုငျပါဘူး ကသေီရယျ ငါဆိုလညျး နငျ့နရောမှာ ဒီလိုပဲဖွဈမှာပါ” သူဇာကား မကျြရညျတှေ တလိမျ့လိမျ့ ကဆြငျးလာကာ ငိုတော့သညျ။ ကသေီကား သူငယျခငျြးမ သူဇာကို တျောတျော သနားသှားသညျ။ “တိတျပါ သူဇာရယျ ဖွဈတတျပါ တယျ။ နငျစိတျမကောငျးမဖွဈနဲ့နျော ဖွဈရလငေါ့သူငယျခငျြးလေးရယျ ငါ့အပွဈပါ သူဇာရယျ တိတျတိတျ ငါကူညီပါ့မယျ ငါမောငျ့ကို အရမျးခဈြသလို နငျကလညျး အခဈြဆုံး သူငယျခငျြးလဟော မောငျက ငါ့ကိုသစ်စာဖောကျပွီး တဈခွားမိနျးကလေး တဈယောကျနဲ့တော့ လုပျမှာမဟုတျဘူး ဒါကွောငျ့ ငါကွံပါ့မယျ” ကသေီကား သူဇာကိုဖကျပွီး ခြော့မော့ နလေတေော့သညျ။ စိတျထဲမှာတော့ မောငျ့ကို နှမြှောပမေဲ့ တဈကွိမျတဈခါလောကျတော့ သူမ သူငယျခငျြးကို ကူညီမယျလို့ ဆုံးဖွတျ လိုကျတော့သညျ။
(၁၁) လငျးထကျ တဈယောကျတော့ဖွငျ့ အခကျတှခေ့ပြွေီ။ သူ့ရဲ့ခဈြလှစှာသော မမကသေီကား တဈညတှငျ သူ့ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျး အကူအညီတောငျးခဲ့သညျ။ ကွားခါစ ယုံပငျမယုံနိုငျ။ ကိုဇျောအောငျကလညျး သူ့မိတျဆှေ။ ဒျေါသူဇာကို ထငျပငျမထငျထားမိ။ သူမ၏ သူငယျခငျြးဖွဈသူ သူ၏ ခဈြလှစှာသော မမကသေီမှ ပွောသဖွငျ့သာ သူယုံ၏။ မမကသေီကတော့ သူ့ကို မောငျ့သဘောပါ မောငျရယျ ဒါပမေဲ့ မမဆန်ဒကတော့ ကူညီစခေငျြတယျ ဟုပွော၏။ ဒါပမေဲ့ သူ မမကသေီကို သစ်စာမဖောကျခငျြပါ။ မမကသေီက သူဇာက သနားစရာပါ မောငျရယျ ဟူသော စကားက မထှကျသညျအပွငျ မမကသေီ မကျြနှာလေး ညိုးနတောကွောငျ့ သူ့အနဖွေငျ့ ကူညီမယျ လို့ ပွောခဲ့သညျ။ ပွောမယျသာ ပွောရသာ မသူဇာကလညျး တျောတျောလှသညျ။ ကလေး(၂)ယောကျအမလေို့သာ ပွောသညျ။ ဖငျက မကြ တဈသားမှေး တဈသှေးလှ ဆိုတာမြိုး ထငျသညျ။ ကိုဇျောအောငျက အပွငျမှာ နတောမြားတော့ သူ့မိနျးမကို ဂရုမစိုကျဖူး ထငျတယျ။ နောကျဆုံး ကသေီကိုယျတိုငျ စီစဉျပေးမှုဖွငျ့ သူနှငျ့သူဇာ တညျးခိုခနျးတဈခုမှာ ခြိနျးခဲ့ကွသညျ။ သူဇာက ကိုဇျောအောငျကို တဈခွားမွို့ သှားလညျမညျဟု ပွောခဲ့ပွီး မွို့စှနျက တိုကျခနျးမှာ ခြိနျးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ဒေါကျဒေါကျဒေါကျ။ တံခါး ခေါကျသံကွောငျ့ သူဇာရငျတှေ တဒုံးဒုံးခုနျလာသညျ။ လငျးထကျ လာပွီထငျသညျ။ ဒီနတေ့ော့ သူ့သူငယျခငျြး ကသေီကို လုပျသလို သူမကို လုပျတော့မညျကို တှေးပွီး သူမအဖုတျလေးထဲမှာပငျ တှေးယုံနှငျ့ ရှစိစိဖွဈလာသညျ။ လငျးထကျကား အခနျးထဲသို့လှမျးဝငျလိုကျတော့ သူဇာက အခနျးတံခါးကို လှမျးပိတျလိုကျသညျ။ သူဇာကား ဘာစကားမှ မပွောပဲ သူ့ကို ရငျဘတျခွငျးတပွေီ့း ပုဆိုးကို လှမျးဆှဲခြှတျလိုသညျ။ သူကလညျး အားကမြခံသူဇာ၏။ အင်ျကြီကို လှမျးခြှတျလိုကျသညျ။ ဒီအခြိနျမှာ မသူဇာကို ကိုဇျောအောငျမိနျးမ ဆိုတာ မနေ့ပွေီ။ မသူဇာကား မမကသေီလို ရုပျသိပျမခြောပမေဲ့ မမကသေီ နီးနီးလောကျ လှတာတော့အမှနျ။ ကလေးမှေးခဲ့ပွီးသူမို့ ထငျသညျ။ နို့နှဈလုံးပျေါတှငျ နို့သီးညိုတိုတိုလေးမြားက ထောငျထနသေညျ။ ဖငျကွီးကလညျး မသူဇာက မမကသေီထကျ ကွီးသညျ။ သူ့ရဲ့ လိငျတံကွီးကို မသူဇာက လကျဖွငျ့ ဖဈြညဈလိုကျသညျ။ အအား သူမခံနိုငျ။ ခကျြခငျြးကို ငပဲက ထောငျမတျ လာသညျ။ သူဇာက လငျးထကျကို ကုတငျပျေါ တှနျးလှဲလိုကျသညျ။
လငျးထကျရဲ့ လီးကွီးကား သူမကသေီဆီက ရခဲ့သော ဗှီဒီယိုထဲကထကျကွီးနပွေီး ဒဈလညျး ပွုတျနပွေီ ကသေီ၏။ သငျကွားပွသမှု ကောငျးသောကွောငျ့ ထငျသညျ။ “မောငျ ငွိမျငွိမျနေ မမ မငျးကို ကောငျးအောငျလုပျပေးမယျ” လငျးထကျက မသူဇာ ဘာလုပျမညျကို မသိ။ သူဇာကား လငျးထကျ၏။ ခွောကျလကျမနီးနီး ရှိနပွေီဖွဈသော လိငျတံကွီးကို နှုတျခမျးထိပျတှငျ တလေို့ကျပွီး နှုတျခမျးနှဈမှာကွားသို့ သှငျးလိုကျသညျ။ လငျးထကျရဲ့လိငျတံကွီးကား သူမ၏ နီထှေးသော နှုတျခမျးထဲသို့ ရောကျရှိသှားခြိနျတှငျ တဆတျဆတျ တုနျနသေညျ။ ခဈြလှစှာသော လငျးထကျရဲ့လီး ဖွဈတာကွောငျ့ သူဇာကား စိတျပါလကျပါ ပွုစုနသေညျ။ လငျးထကျကား မကျြလုံးကွီးမေးပွီး သူဇာရဲ့ ဆံပငျကွားကို လကျကလေးထိုးဖှပွီး ဆံပငျတှကေို ဆုပျကိုငျထားသညျ။ သူဇာကား လငျးထကျရဲ့ လီးဒဈကို ပတျပတျလညျ လြှာလေးနဲ့ ဝဝေို့ကျပွီး လှညျ့ပတျ ယကျပေးတာကွောငျ့ လငျးထကျကား ဆှမြေိုး မသှေ့ားသညျ။ စီစဉျပေးသော မမကသေီကိုပငျ ကြေးဇူး တငျမိသှားသညျ။ နောကျဆုံး လီးထဲမှ သုတျရညျတှပေငျ မထိနျးနိုငျ မသိမျးနိုငျဖွဈပွီး ပနျးထှကျ ကုနျတော့သညျ။ မသူဇာက သူ့ဘေးမှာ ယှဉျလှဲတဲ့အခြိနျမှာ မသူဇာရဲ့ နို့သီး ခြှနျခြှနျလေးတှကေို လြှာနဲ့ ဝဝေို့ကျပွီး သူက ယကျပေးသလို လကျတဈဖကျကလညျး နို့သီးတဈလုံးကို လကျညိုးနဲ့လကျမ ညှပျပွီး ခပြေေးနပေါတယျ။
အို မောငျ့ အ အ သူဇာကား တအီးအီးတအားအား ဖွဈနပေါတယျ။ သူလညျး ထပျပွီး သူဇာရဲ့ပေါငျကွားထဲက အဖုတျလးကို လြှာနဲ့အပွားလိုကျ ယကျတငျလိုကျတဲ့အခါမှာ အငျး ဟငျးဟငျး ခိခိ ယား တယျ။ မောငျရဲ့ ရပျပါတော့ အိုးအိုး သူ့ခေါငျးကို အတငျးတှနျးထုတျပမေဲ့ သူက သူဇာပေါငျကို ဖိပွီး အဖုတျ ဖောငျးဖောငျးလေးကို (၅)မိနဈလောကျ ဆကျတိုကျ ယကျတဲ့အခါမှာတော့ သူဇာက အငျးအငျးအားအား ငယျသံပါအောငျ အျောဟဈရငျး တဈခြိ ပွီးသှားပါတယျ။ အို မောငျရယျ ကောငျးလိုကျတာ။ လငျးထကျကား မသူဇာကို ကွညျ့ပွီး သူ့လီးက ရုနျးကွှလာပါ တယျ။ မသူဇာကို ပညာ နညျးနညျးပွမှပါ။ “ကဲ မမ ပကျလကျလှနျပွီး ခါးအောကျကွှလိုကျ” လငျးထကျက မသူဇာရဲ့ ခါးအောကျကို တခွားကုတငျပျေါက ခေါငျးဦးနှဈလုံးကို ခံလိုကျပါတယျ။ သူဇာအဖို့ ပကျလကျ အနအေထားမှာ ခါးအောကျမှာ ခေါငျးအုံးနှဈလုံး ဆငျ့ခံ ထားတဲ့အတှကျ ခေါငျးက အောကျရောကျနပွေီး ခါးက ကော့ထားသလို ဖွဈနပေါ တယျ။
လငျးထကျက သူမခွထေောကျနှဈခြောငျးကို သူ့ပုခုံးပျေါတငျပွီး သူ့လီးနဲ့ သူမစောကျပတျ အကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ (၅)မိနဈခနျ့ ပှတျပေးလိုကျတာန သူဇာဟာ အလိုးခံခငျြလို့ ယှလာပါတယျ။ လငျးထကျက သူမကိုညဉျးနတောပါ။ အငျးဟငျးဟငျး လုပျပါတော့မောငျရယျ မမကို သနားပါ လုပျပါတော့ တောငျးပနျပါ တယျ။ လငျးထကျလညျး မသူဇာရဲ့ အဖုတျဝကို လီးနဲ့ သခြောခြိနျပွီး ဆောငျ့သှငျး လိုကျပါ တယျ။ လငျးထကျရဲ့လိငျတံကွီးဟာ အဖုတျထဲ အရှိနျနဲ့ တိုးဝငျသှားပွီး ဗွဈ ဘုတျဘုတျ အငျ့အငျ အအ မောငျ မမ အဖုတျလေးတော့ ကှဲပွီထငျပါတယျ။ လငျးထကျက ဒါဆို ထုတျထားလိုကျတော့မယျ မလုပျပါနဲ့ မောငျရယျ လငျးထကျကား မသူဇာကို လိုးရတာ ကွိုကျသှားပါပွီ။ ကိုဇျောအောငျက ပဈထားပမေဲ့ သူမပဈထားပါဘူး ဒါကွောငျ့ နတေို့ငျး လုပျရအောငျကွံတေ့ာတာပါ။
“ကြှနျတျော နတေို့ငျးလုပျရငျခံမှာလား” “အိုမောငျရယျ လုပျပါမမကို မငျးခခြငျြရငျနောကျရောနတေို့ငျးခြ” “အငျးအငျး ဘှတျဘှတျ ဖောကျဖောကျ” “အား အငျး” ခေါငျးအုံး ခံထားပွီး ခါးကော့ နတောကွောငျ့ လငျးထကျရဲ့ အပျေါစီးက ဆောငျ့ခကျြတိုငျးကို သူဇာ ရကျရကျစကျစကျ ခံနရေပါ တယျ။ လငျးထကျ အဖို့လညျး မသူဇာကို လုပျရတာကို ကွိုကျသှားပါပွီ။ သူဇာကလညျး စောကျပတျထဲကို လငျးထကျ လီးကို ပွနျထုတျလိုကျတိုငျး ဖငျရှုံ့ရှုံ့လိုကျတာကွောငျ့ စောကျပတျ နှုတျခမျးသားလေးတှကေ လငျးထကျရဲ့လီးကို ညှဈညှဈပေးပွီး လိုးရတာ အရမျးကို ကောငျးစပေါ တယျ။ ဖှတျဖှတျဘတျဘတျ စောကျပတျထဲ လီးဝငျသံထှကျသံတှကေ အခနျးထဲမှာ ဆူညံနပွေီး နောကျဆုံးမှာတော့ လငျးထကျဟာ လရတှေကေို သူဇာ့သားအိမျထဲ ပနျးထုတျ လိုကျခြိနျမှာတော့ သူဇာလညျး သူမအဖုတျထဲမှ စောကျရညျမြားကို စီးကလြာရာ သူမဖငျဝအထိပငျ ထိုအရညျမြားက လိမျ့ဆငျးသှားပွီး သူမအဖုတျထဲ လီးတပျရကျ တနျးလနျးနှငျ့ပငျ သူဇာကိုယျပျေါသို့ မှောကျကြ သှားလတေော့သညျ။
(၁၂) တဈပတျခနျ့ သူဇာကား လငျးထကျ၏ လိုးခွငျးကို နရေ့ောညပါ ကုနျးလို့ အားရသှားသော အခါ သူမအိမျသို့ ခရီးမှ ပွနျလာသယောငျပွုကာ ပွနျသှားသညျ။ ကသေီကား သူမခဈြသော သူငယျခငျြး၏ နှလုံးသားရောဂါကို သူမခဈြသောမောငျမှ ကုစားပေးနိုငျသဖွငျ့ ကနြေပျသှားသညျ။ သူမခဈြသောမောငျကား သူမအပျေါ သစ်စာရှိသျောလညျး သူမသူငယျခငျြး၏ စိတျရောဂါကို ကုနိုငျသဖွငျ့ မောငျ့ကို ကြေးဇူးတငျမိသညျ။ နှဈနှဈခနျ့အကွာတှငျ သူမခဈြသော မောငျအတှကျ သားလေးတဈယောကျ မှေးပေးခဲ့သညျ။ ထိုသား၏ စရိုကျမှာ ကိုကွီးမောငျနှငျ့ တူသညျ။ ပွီးတော့ လငျးထကျနှငျ့ သူမကလညျး အရမျးခဈြကွသညျ။ ကလေးကလညျး လငျးထကျကို သူမထကျပိုခဈြသညျဟု ထငျမိသညျ။
(မှတျခကျြ။ ။ တညျးခိုခနျးတှငျ သူမ စီမံမှုကွောငျ့ မသူဇာကို သူခဈြသော မမဆန်ဒအရ သှားပွီး လိုးပေးခဲ့သော လငျးထကျသညျ သူဇာကို စှဲသှားသဖွငျ့နောကျ မမကသေီနှငျ့ ကိုဇျောအောငျ မသိအောငျ ခဏခဏ ခြိနျးတှပွေီ့း လုပျခဲ့တာကွောငျ့ သူဇာမှာ သူခဈြသော မောငျအတှကျ သားလေးတဈယောကျ ရခဲ့သညျ။ ကိုဇျောအောငျကား လငျးထကျ သူ့သားကိုခြီလြှငျ ကလေးခဈြတတျသောကွောငျ့ ခြီတယျလို့ ထငျမိပမေဲ့ သူဇာကတော့ ကလေးကိုခြီတိုငျး ပွုံးစိစိဖွဈနတောကို သူသတိမထားမိပါ ) ပွီးပါပွီ။
ဦးမောင် ဆုံးသွားပြီ ဆိုသောသတင်းအား သူကြားကြားချင်းမယုံနိုင်သေးပေ။ သူနယ်သို့ ဦးကောင်း စေလွှတ်သော အလုပ်ကိစ္စဖြင့် သွားရောက်နေချိန်တွင် ဦးမောင်သူ၏ အိမ်တွင်မူးလဲပြီး ဆုံးပါးသွားပြီ ဆိုသော သတင်းကို ဖုန်းဆက်ပြောသဖြင့် သိရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဦးမောင်ဆုံးပြီ ဆိုသော သတင်း သူ့ထံဖုန်းဆက်ပြီး ပြောသောသူက ဦးမောင်ဇနီး ဒေါ်ကေသီထွန်း ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသည်။ သူ ယုံပင် မယုံနိုင်။ ပြောရလျှင် သူ အခုထိမယုံနိုင်သေး။ မိုးထက်မောင် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးမောင်ကား ပျော်ပျော်နေတတ်သူ၊ အသက် (၅၀) ခန့်ရှိပြီး ရုပ်ကလည်း ဖြောင့်သည်။ သဘောကလည်း ကောင်းသဖြင့် လူတိုင်းက ခင်ကြသည်။ သူ့ဇနီး ဒေါ်ကေသီထွန်းကား အသက်(၄၀)ခန့်၊ အသားဖြူဖြူ၊ချောချောနှင့် မသိလျှင် (၃၀) လောက်ဟု ထင်ရ လောက်အောင် နုပျိုသည်။ သူကား နယ်မြို့လေးမှ မိမရှိ ဖမရှိ တစ်ကောင်ကြွက်။ (၁၀) တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် တက်မည့်နှစ်တွင် အဖေ ဆုံးသွားခဲ့သည်။
အမေက သူ ငယ်စဉ်တောင်ကြေး ကလေးဘဝကတည်းက ဆုံးပြီ။ သူပင် မမှတ်မိတော့။ ဒီလိုနဲ့ ကြုံရာကျပန်းလုပ်ပြီး ဘဝကိုရုန်းကန်နေစဉ်။ တစ်နေ့ သူ့ဘ၀ ပြောင်းခဲ့၏။ ညဖက် ကုန်ထမ်းပြီး ပြန်လာစဉ် သူတို့မြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဖြတ်သွားရင်း ကားလမ်းမှာ ကားပျက်နေသော ဦးမောင်ကို ဆေးသမား လူငယ်လေး (၃) ဦးမှ လုယက်ရန် ကြိုးစားနေသည်ကို သူက ကူညီခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဦးမောင်က သူ့ကို ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး မြို့ကို ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ သူ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ သူ့ကိုယ်စား တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တယ်။ သားသမီး မရှိတဲ့ ဦးမောင်တို့လင်မယားဟာ သူ့ကို သူတို့မိသားစုရဲ့ ညီအရင်း၊ မောင်အရင်းသဖွယ် သဘောထားပြီး အရေးကြီးကိစ္စတွေမှာ တိုင်ပင်တယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ကိုလည်း ဦးမောင်က သူတို့အိမ်မှာပဲ ခေါ်ထားခဲ့တယ်။ ဦးမောင်က မိတ်ဆွေတွေနဲ့ သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးရင်တောင်မှ သူ့ကို ဥိးမောင်က သူ့နယ်က တစ်ဝမ်းကွဲညီလို့ပဲ ပြောတယ်လေ။ ဖြစ်ရလေ။ ကိုကြီး ဦးမောင်ရယ်။ သူ သတင်းကြားကြားချင်း သူတည်းနေတဲ့ တည်းခိုခန်းကအခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ငိုနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်တွေကို အေးအေး ထားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဦးမောင်ကို သိပ်ချစ်ပြီး သူ့ကို မောင်တစ်ယောက်လို ခင်တွယ်နေရှာတဲ့ မမကေသီထွန်းရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ရင်း စိတ်ပူသွားမိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူနယ်ကနေ ညတွင်းချင်းပဲ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
. ကိုကြီးရေ ကိုကြီးသိပ်ချစ်တဲ့ ကိုကြီးညီရောက်လာပြီလေ။ ဟင့်ဟင့်။ အိမ်ထဲရောက်ရောက်ခြင်း မမကေသီထွန်းက ဝမ်းနည်းသံနဲ့ ငိုလိုက်ပါတယ်။ သူ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဦးမောင်ရဲ့ အလောင်းကို မြေချပြီးနေပါပြီ။ သူလာတဲ့လမ်းမှာ ရေကြီးပြီး တံတားတွေ ကျိုးနေတာကြောင့် ဦးမောင်အလောင်းကို မြင်တောင် မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ သူ့ရင်ထဲမှာ ငိုချင်ပေမဲ့ သူငိုရင် ဦးမောင်မိန်းမ မမကေသီထွန်းက ပိုဝမ်းနည်းမယ် ဆိုတာသိလို့ မငိုမိအောင် ထိန်းထားပါတယ်။ “ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမမ” “မောင်လေးရယ် နင့်ကိုကြီးကလေ။ ဆုံးမဲ့မနက်က အလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီး ရေချိုးတယ်။ ပြီးတော့ ရေချိုးခန်းထဲက တော်တော်နဲ့ ထွက်မလာတာနဲ့ တံခါးသွားဖွင့် ကြည့်တော့ မင်းကိုကြီး လဲနေတာ တွေ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆေးရုံကို ပို့ကြတယ်။ သူက သတိလည်လာသေးတယ်။ မင်းကို တစ်ခုခုမှာချင်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ မင်းနာမည်ပဲခေါ်နေတာ။ ပြိးတော့။
ဟင့်ဟင့်” မမကေသီကား စကား ဆက်မပြောနိုင်တော့။ ကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ခါပြီး ငိုတော့သည်။ (၂) ဦးမောင်ရဲ့ နာရေးကိစ္စတွေကို စီစဉ်ရ၊ တစ်ဖက်ကလည်း ဦးမောင်ရဲ့ မပြတ်သေးတဲ့ အလုပ်တွေက ဦးမောင် မရှိတော့ သူပဲ လုပ်ပေးရတယ်။ .မမကေသီမှာကလည်း အဖေအမေတွေက မရှိကြတော့သလို ဦးမောင်မှာကလည်း ငယ်ကတည်းက မိဘမဲ့ဆိုတော့ ဆွေမျိုးတွေက မရှိပါဘူး။ မမကေသီ အနေနဲ့ကလည်း ဦးမောင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို မသိပါဘူး။ နားလည်း မလည်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီကို သူကပဲ ဦးဆောင်ပြီး ဆက်လက် လုပ်ပေးနေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မမကေသီအိမ်မှာ ဆက်နေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ သူ ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ချိန်းထားရင်း ငြိမ်သက်နေတဲ့ သူ့ဘဝမှာ မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က သူက ဖုန်းပွတ်နေတာပါ။ ဒီအချိန်မှာ တစ်ဖက်ခန်းက အသောက်ဝိုင်းက စကားပြောသံ တစ်ချို့က သူ့နားထဲ ရောက်လာပါတယ်။ .နေ့ခင်းဘက် လူရှင်းနေချိန် ဆိုတော့ အတိုင်းသား ကြား နေရတာပေါ့လေ။ “ဟိုလေကွာ။ မိုးထက်မောင်ကုမ္ပဏီက လင်းထက် ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို ပြောတာလား” ဟိုက်ရော။ သူ့နာမည် ပါလာသဖြင့် ဘာတွေလဲဟဆိုပြီး သူ ဆက်နားထောင်နေ၏။ “အင်းလေ ကောင်လေးက ရုပ်ကလည်း ဖြောင့်တယ်။ ပြိးတော့ လုပ်ငန်းလည်း ကျွမ်းတယ်။ ငါတော့ ထင်တယ်။ ဒေါ်ကေသီထွန်းကများ ဒီကောင်လေးနဲ့ ငြိနေတာများလား” “ဟ။ ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မှာပေါ့ဟ။ ကေသီထွန်းက အရွယ်ကလည်း ရှိသေး။
ကိုမောင်ကြီးကလည်း ဆုံးတော့ အားကိုးချင်ရှာမှာပေါ့လေ။ ဟုတ်ဖူးလား။ ဟားဟားဟား” သူ ဒေါသပင် ထောင်းကနဲ ဖြစ်သွား၏ ဘယ်သူတွေမှန်းကို မသိ။ .စော်စော်ကားကားပင်။ သူနဲ့ မမကေသီ ရိုးရိုးသားသား နေတာကိုပင် သွားပုတ်လေလွင့် ပြောချင်နေကြ၏။ ခက်တာဘဲ။ “ကိုလင်းထက်” သူ့ရှေ့သို့ ချိန်းထားသော ဧည့်သည် ရောက်လာပြီ။ ခုနက ကိစ္စကို မေ့သွားတော့သည်။ “ကဲထိုင်ဗျာ။ အကိုတစ်ခုခုမှာ။ ( ) က နေရာက အဆင်ပြေတယ် အဲ့နေရာကိုဝယ်ပြီး—–”
(၃) အိမ်ရှေ့ကို ကားပြန်ရောက်တော့ မမကေသီထွန်းကား ခြံထဲတွင်။ “တီတီ” “မအေးရေ နင့်ကိုလေးပြန်လာပြီ။ တံခါးဖွင့်လိုက်” အိမ်ဖော်မလေးမိအေးကား တံခါးကို လာဖွင့်ပေးသည်။ “ကဲမောင်လေး။ ရေအရင်ချိုးမလား။ ထမင်းအရင်စားမလား” “ကျွန်တော် ရေအရင်ချိုးလိုက်ဦးမယ်” “ကဲ ဒေါ်လေးမြရေ ထမင်း သွားပြင် ထားလိုက်တော့။ မောင်လေး ရေချိုးပြီးရင် ထမင်း အဆင်သင့် စားလို့ရအောင်။ ဒီနေ့ငါ့မောင်ကြိုက်တဲ့ ပုဇွန်ထုပ်ချက်ထားတယ်” မမရဲ့ သွယ်လျတဲ့ လက်ချောင်းဖြူဖြူလေးတွေက သူ့လက်မောင်းကို ကိုင်ရင်း ပြောလိုက်တာပါ။ ခါတိုင်း သူ့အနေနဲ့ မမက ဒီလိုပဲ သူပြန်လာတိုင်း ခုလိုတစ်ခါတစ်ရံ သူမ မောင်အရင်းလို သဘောထားပြီး လက်မောင်းကို ဒီလိုချိတ်တတ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
နေ့လည်က ဆိုင်ထဲက ကြားခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ကြားယောင်ရင်း သူ့ နှလုံးခုန်သံက မြန်လာသလိုလို။ မမဟာ မြန်မာဆန်ဆန် အပြာရောင်ပေါ်မှာ အဖြူပွင့်လေးတွေပါတဲ့ ရင်ဖုံးနဲ့ ထမိန်ကို ဝမ်းဆက် တွဲဝတ်ထားတာပါ။ ခါးလည်လောက် ရှိတဲ့ ဆံပင်တွေကို ထုံး ထားတာကြောင့် လည်တိုင် ဖြူဖြူလေးနဲ့ ဂုတ်သား ဝင်းဝင်း လေးတွေကို မြင်နေရပါတယ်။ ခါးက သိမ်ပြီး တင်းရင်းလျတဲ့ တင်သားတွေကြောင့် မသိတဲ့သူက အပျိုလို့ ထင်မိကြမှာပဲ။ အင်း။ ငါ မကြံကောင်းမစည်ရာ ဘာတွေ တွေးနေပါလိမ့်။ ကိုယ့် ကျေးဇူးရှင်ကို ဟူသော အသိ ဝင်လာချိန်တွင် အာခေါင်က ခြောက်သလိုလို ရေငတ်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေတာ သတိထားမိ၏။
(၄) ကေသီကား မွေ့ယာပေါ်တွင် တလူးလွန့်လွန့်ဖြင့် အိပ်မပျော်နိုင်သေးပေ။ ညနေက မောင် ကြည့်သော အကြည့်တွေကို ပြန်မြင်ယောင်မိနေသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း သူမက မောင့် လက်မောင်းတွေကို သွားကိုင်တဲ့ အချိန်မှာ မောင့် အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းနေတာ သိတယ်။ ပြီးတော့ သူမ ဂုတ်ဖြူဖြူလေးကို အကြာကြီးပဲ စိုက်ကြည့်နေတာတွေ့တော့ စိတ်ကြည်နူးမိတယ်။ မောင်ရယ်။ မမ အချစ်တွေကို မင်းလေး မသိဘူးနော်။ မောင်က အေးစက်စက်နဲ့။ ကိုယ့် ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ ဇနီးဆိုပြီး ထိန်းနေတာများလား။ ဒါက ပြစ်မှားတာ မဟုတ်ဘူးမောင်ရဲ့။ နင့် ကိုကြီးက ဆုံးသွားတာ ကြာပြိလေ။ တစ်နှစ်လောက် ရှိရော့မယ်။
ဒါမှမဟုတ်အပျိုမဟုတ်လို့ စိတ် မဝင်စားတာလား မောင်ရယ်။ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူများ ရှိနေလို့လား။ တွေးရင်းနှင့်ပင် ရင်မောလာသည်။ မမကေသီထွန်း တစ်ယောက်တည်း အခန်းထဲမှာ အတွေူးကမ္ဘာထဲ ချာချာလည်ရင်း အိပ်မပျော်နိုင်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း လင်းထက်မှာလည်း အိပ်မပျော်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ မမကေသီထွန်းကို မြင်ယောင် နေသလို ကိုကြီးဦးမောင်ကိုလည်း သတိ ရရ လာတာမို့ အဲ့ညကသူတို့ နှစ်ယောက်လုံး အိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။ အိပ်ယာ ထဲမှာ အိပ်မရတဲ့ လင်းထက် တစ်ယောက်ဟာ အာခေါင် ခြောက်ပြီး ရေငတ်သလိုလို ဖြစ်ချင် နေတာကြောင့် ဝရံတာဘက်ကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ စီးကရက်ဘူးထဲက စီးကရက် တစ်လိပ်ကို ထုတ်သောက် နေပါတယ်။
စီးကရက်တစ်လိပ် ကုန်တဲ့အချိန်မှာတော့ (၁၅)မိနစ်လောက် နေပြီး အခန်းဘက်ကို ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ မမကေသီထွန်းအခန်းရှေ့ ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အခန်းထဲက မီးလင်းနေတာကြောင့် မမတစ်ယောက် အခန်းထဲမှာ မီးမပိတ်မိဘဲ အိပ်ပျော်နေတယ် ထင် တယ် ဟုတွေးမိတယ်။ သူ့ခြေလှမ်းတွေ တန့်သွားပြီး အခန်းဘက်ကို အမှတ်မထင်ကြည့်မိတဲ့ အခါမှာတော့ တံခါးက အနည်းငယ် ဟ နေတာကို တွေ့ရတယ်။ “အခန်းရှေ့က မောင်လေးလား” “ဗျာ ဟုတ်” “အိပ်မပျော်ဘူးထင်တယ်။ နေဦးမမထွက်လာခဲ့ဦးမယ် ခြံထဲဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ရအောင်” (၂)မိနစ်လောက် စောင့်နေတဲ့အခါမှာ မမကေသီထွန်းဟာ အခန်းထဲက ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ယာထဲက ထလာတာမို့ မမမျက်နှာလေးဟာ ပင်ကို အတိုင်းလေးပါပဲ။ ဆံပင်လေးတွေက အနည်းငယ် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေပြီး ညဝတ် ပိုးပျော့ဝတ်စုံကို ဝတ်ထားတာကြောင့် မမရဲ့ ကိုယ်လုံးအလှတွေ ကောက်ကြောင်းတွေက အတိုင်းသားပါပဲ။
အပျိုတွေထက်ပင် တောင့်ပြီး လှပ လှပါတယ်။ ဒါကို အသက်(၄၀)လို့ပြော ဘယ်သူက ယုံမှာတုန်း။ ၃၀နှစ်လောက်သာ ထင်နေရ၏။ အာခေါင်ခြောက်သလိုလို ဖြစ်လာတာကြောင့် မျက်နှာကို တစ်ဖက်ကို မသိမသာ လွဲထား လိုက်ပါတယ်။ (၅) ကေသီထွန်းဟာ လင်းထက်နဲ့အတူ အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါ တယ်။ အချိန်က ည(၁)နာရီလောက် ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အိမ်အောက်ထပ်မှာနေတဲ့ ဒေါ်မြနဲ့မိအေးတို့က အိပ်ကုန်ပါပြီ ဒါကြောင့် အသံ မကြားအောင် ခြေဖော့ပြီး ဆင်းလာကြပါ တယ်။ အနောက်ဘက် တံခါးကနေ ထွက်လာကြပြီး ခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက်ကြပါ တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ညဖက်ဆိုတော့ ခွေးတွေက အုပ်စုလိုက် အူကြပါ တယ်။
“အူ ဝူး ဝူး…” ကြောက်လို့ထင် တယ်။ မမကေသီထွန်းဟာ လင်းထက်ရဲ့ လက်မောင်းကို သူမလက်နဲ့ကိုင်ပြီး “မောင်လေး မမကြောက် တယ်။ ” “မကြောက်ပါနဲ့ မမရယ် ကျွန်တော် တစ်ယောက်လုံး ရှိနေတဲ့ဟာ” ခြံထဲက ပန်းရုံနံဘေးက ခုံတန်းလေးမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်ပြီး “မောင်လေးရယ် နင့်ကိုကြီး မရှိတော့ ဘဝြကီးကခြောက်သွေ့သွားသလိုပဲ နင်ရော ရည်းစားလေး ဘာလေး မရှိဘူးလား မမအတွက် ယောင်းမချောလေး တစ်ယောက်လောက် ရှာပေး စကားပြောဖော်မရှိဘူး” “ဟင်း အမမောင်က စွံမှမစွံတာ” “အံမယ် လျှောက်ပြော ငါ့မောင်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီး ငါ့မောင်က ရုပ်က ဖြောင့်တော့ ကောင်မလေးတွေက ကြွေမှာပဲ ဟိုနေ့က ငါ့မောင်နဲ့ အမ ဈေးဝယ် သွားတော မောင်လေးသာ သတိမထားမိတာ ဈေးထဲက ကောင်မလေးတွေက ငါ့မောင်ကို ကြည့်ကြည့် နေကြတာ အမတောင် အူတို တယ်။ ဟွန်း” “အံမယ် ဖြစ်ရ တယ်။ အမကိုလည်း ဈေးထဲက ကောင်လေးတွေရော လူကြိးတွေရော မျက်လုံး ကျွတ်မတတ် ငေးနေကြတာ ဒေါသတောင် ထွက် တယ်။ ”
“ငါ့မောင်ကပေါက်တတ်ကရပြောရော့မယ် ခ်ခ်” မမကေသီကား သူ့ပုခုံးကို လှမ်းကိုင်ရင်း ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုယ်ဟန် အနေအထား ပျက်သွားသောကြောင့် သူ့ဘက်ကို ယိုင်သွားသဖြင့် ဖမ်းထိန်း လိုက်ရ တယ်။ မမကေသိရဲ့ ရင်ညွှန့်လေးက သူ့ရင်ဘတ်ကိုပင် မထိတထိဖြစ်သွားတော့ ရင်ထဲမှာ တဒုတ်ဒုတ် ဖြစ်သွားတာပေါ့ ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်နေလို့သာပေါ့ နို့မို့ဆို ဟူး (၆) “ချီးယားစ်” “ကဲ ကိုလင်းထက်ရေ အလုပ်ကိစ္စတွေပဲ ပြောနေတာ ဒီတစ်ခေါတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့” ဦးဇော်အောင်ကား တော်တော်မူးနေပြီ ဦးဇော်အောင်တို့ကုမ္ပဏီသို့ အခက်အခဲ ရှိချိန်တွင် သူ ပံ့ပိုး ပေးထားခဲ့ရာမှ ယခုအခါ လုပ်ငန်းများမှ ငွေပြန်ပေါ်ချိန် ရောက်လာသဖြင့် နေ့လည်က သူ့ရုံးခန်းသို့လာပြီး ညနေစောင်း လာခေါ်မယ် ဟုပြောကာ ရုံးဆင်းချိန်တွင် လာခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စင်တင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်၏။ ဦးဇော်အောင်က ခုနက စင်တင်မှ ကောင်မလေးကို ပန်းကုံး သွားစွပ်ပြီး ဆင်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကိုလင်းထက်က ဒါမျိုးတွေစိတ်မဝင်စားဘူးလား” သူခေါင်းယမ်းပြမိသည်။
“ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ အပျော်ပါ အိမ်မှာက ကြင်သူနဲ့ သားနဲ့သမီးက ရှိသေး တယ်လေ ခင်ဗျား အိမ်ထောင်ပြုသင့်ပြီနော် ကိုလင်းထက် စီးပွားရေးကလည်း အောင်မြင် ရုပ်ကလည်း ဖြောင့် တယ်။ ယောင်္ကျားချင်းတောင် သိ တယ်။ ” “ဟာ ခင်ဗျားကလည်း နောက်နေ ပြန်ပြီ” “နောက်တာ မဟုတ်ဖူး ကိုလင်းထက်ရဲ့ သြော် သိပြီသိပြီ ခင်ဗျားမှာ ကေသီ တစ်ယောက်လုံး ရှိနေတာပဲ ဟက်ဟက်” “ဗျာ မပြောကောင်းတာဗျာ သူက ကျွန်တော့် ကျေးဇူးရှင် ကိုကြိးရဲ့ ” “ကိုမောင်က ဆုံးပြီလေဗျာ ကေသီက ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး ကိုလင်းထက်ရဲ့ ကျောင်းနေဘက်တွေ ကျောင်းတုန်းကလည်းလှ အခုလည်း လှတုန်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ အသက်တူ ဆိုတော့ ခင်ဗျားထက် ၁၀နှစ်ကျော်လောက် ကြီးမှာ မထင်ရဘူး (၃၀)လောက်လို့ပဲ ထင်ရ တယ်။. ခုထိ နောက်အိမ်ထောင် မပြုသေးတာတာကြည့် ကိုမောင်ဆုံးတာ (၂)နှစ်လောက်ရှိပြီ ခင်ဗျား စောင့်နေတာနေမှာ”
“မဟုတ်တာဗျာ” “ဟုတ်တယ်။ ကိုလင်းထက်ရေ သူက ကျွန်တော့်မိန်းမ သူဇာနဲ့ ဘော်ဒါတွေ ခင်ဗျား ရုံးသွားတဲအချိန်ဆို လာလည်ပါ့ဗျာ သူဇာဆီကို ခင်ဗျား အကြောင်း ပြောလိုက်တာမှ ကျုပ်လည်း သူတို့ချင်းပြောတာ ခိုးနားထောင်လို့ကြားတာ ဗျို ဟက်ဟက်” လင်းထက်ကား အပြန်လမ်းတွင် ပျော်သလိုလိုဖြစ်နေ၏။ ကားမောင်းရင်းပင် ပျော်နေသည်။ မမကေသီ၏။ အကြောင်းကိုတော့သိရပြီ။ ဦးဇော်အောင်က “ကိုလင်းထက်ရေ မမေ့နဲ့နော်” ဟု သူ့ပုခုံးကို လက်ဖြင့်ပုတ်ရင်း သူ့အိမ်ရှေ့ထိ လိုက်ပို့ရင်းပြောသွား၏။ ခြံရှေ့တွင်ကား မမကေသီတစ်ယောက် ထိုင်စောင့်နေသည်။ ဒေါ်မြတို့ မိအေးတို့ကား အိပ်ပြီထင် တယ်။ ခြံတံခါးကို လာဖွင့်ပေးသည်။
“ဟာ မမဒီအချိန်ထိ ဘာလို့စောင့်နေတာလဲ ကျွန်တော်ခြံတံခါးသော့တစ်ချောင်းအပိုရှိ တယ်လေ” “ဟူး ငါ့မောင်ကို စိတ်ပူလို့ပါကွယ် လာထမင်းစားရအောင်” “မမ မစားရသေးဘူးလား” “ဟင့်အင်း ငါ့မောင်မှပြန်မလာတာ” သူ့အနေနှင့်လည်း ဆိုင်မှာ သောက်တာကများပြီး အစာကသိပ်မစားခဲ့သဖြင့် ဆာသလို ဖြစ်နေသည်။ ကားပေါ်က အဆင်းမှာ သိပ်ပင်မဟန်နိုင်။ မမကေသီက “ဟွန်း လူဆိုးလေး သောက်ခဲ့တာ များပြီ ကဲကဲ အမပုခုံးကို တွဲလိုက်” မမကေသီက သူ့ကို သူမ ပုခုံးပေါ် လက်တင်ပြီး တွဲခေါ်၏။ ယိုင်နဲ့နေသော ခြေထောက်များက မဟန်ချင်။ ဒါနဲ့ သူမကို ဖက်ထားသလို ဖြစ်နေ၏။ အိစက်နေသော မမ၏ ဂုတ်သားလေးများကို ဖက်ထားပြီး မမ၏ ရင်ညွှန့်ကသူ့ကျောကို ကပ်နေ၏။ “ကဲကဲ ကောင်ဆိုးလေးကတော့မူးနေပြီ လာ” သူမက သံပုရာသီးတစ်လုံးကို ခွဲပြီးအရည်များကို နားထဲလောင်းချပေးပြီး တစ်လုံးဖြင့် နားထင်ကို လှိမ့်ပေး၏။ တော်တော်လေး အမူးပြေသွား၏။ “မမကျွန်တော်ပြောစရာရှိ တယ်” “ဘာလဲမောင်လေးရဲ့” ကေသီက သံပုရာရေနောက်တစ်ခွက် ထပ်ဖျော်နေစဉ် လင်းထက်က ပြောသောကြောင့် မေးလိုက်၏။
“ဟိုလေ ဒိနေ့မောင်လေး ဘာကြောင့် သောက်လာလဲ သိလား” “ပြောလေ မောင်လေးရဲ့” မမကေသီကား တစ်ဖက်သို့ လှည့်ပြီး သံပုရာရည် ဖျော်နေသဖြင့် မသိ။ “ဒီနေ့ကောင်မလေးဆီကအဖြေရလာ တယ်” (၇) ကေသီ ရင်ထဲမှာ ဒုတ်ခနဲ ဖြစ်သွား၏။ သံပုရာရည် ဖျော်တာပင် ရပ်သွား၏။ ဝမ်းနည်းစိတ်များက တလိပ်လိပ် တက်လာ၏။ “ဘယ်ကလဲ မောင်လေးရဲ့ ငါ့မောင် ရွေးထားတာတော့ ချောမှာပါ” အသံကို ထိန်းရင်း ပြောသော်လည်း အနည်းငယ်တုန်ခါနေ၏။ “နောက်တစ်ပတ်ကျရင် အမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေ” “အင်းလေ အမယောင်းမလေးကို ကြည့်ရတာပေါ့ အမအတွက်လည်း အဖော်ရပြီ” ကေသီကား ဝမ်းနည်းမှုကို မထိန်းနိုင်တော့။ မျက်နှာက ပြီုတော့မည့်မိုးလို ဖြစ်နေပြီ။ လင်းထက် မြင်သွားမှာလည်း စိုးသည်။ ဒါကြောင့် “သြော် အမ ခြံတံခါးသော့ မခတ်ခဲ့ရသေးဘူး သွားခတ် လိုက်ဦးမယ်” ဟုဆိုကာ တစ်ဖက်သို့ အမြန်လှည့်ပြီး ခြံထဲသို့ သွက်သွက် လျှောက်ခဲ့၏။ မျက်ရည်များက မထိန်းနိုင်တော့။ “ရက်စက် တယ် မောင်ရယ်” လင်းထက်ကား မမကေသီနောက်မှ အသာ လိုက်ခဲ့၏။ ခြံတံခါးနားကို မှီရင်း ငိုနေသော မမကေသီကား သူ့ကိုမမြင်။ သူက မမကေသီအနောက်မှ သွားပြီး မမကေသီခါးကို လှမ်းဖက်ပြီး ဆွဲလှည့် လိုက်သည်။
ရုတ်တရက် ဖက်ခံလိုက်ရသောကြောင့် ကေသီ လှန့်သွား၏။ နောက်ကို ကြည့်တော့ လင်းထက် မျက်နှာကပြုံးစိစိနဲ့ “မမ ဝမ်းနည်းသွားလား မမစိတ်ကိုစမ်းကြည့်တာ မမကိုချစ် တယ် ကောင်မလေး ဆိုတာ မမကို ပြောတာ” ကေသီကား ခုနက ဝမ်းနည်းတာပျောက်သွား၏။ ဝမ်းသာသဖြင့် မျက်နှာမှာ ပြုံးသွားသည်။ အို ရှက်လွန်း သဖြင့် မျက်နှာကို လင်းထက်ရင်ခွင်ထဲ ဖွတ်ထား လိုက်တော့သည်။ “မျက်နှာမော့ပါဦး မမရဲ့ ရှက်ပါ တယ်နော် မမတစ်ယောက် စတာကို မသိဘူး ဝမ်းနည်း သွားလိုက်တာ ကျွန်တော်က ကိုဇော်အောင်ပြောပြလို့ မမ သူ့မိန်းမ မသူဇာအိမ် အလည်သွားရင် ကျွန်တော့်အကြောင်း မသူဇာကို ပြောပြဦးမယ်” “အို ရှက်လိုက်တာ သူဇာကတော့ သွားမှရန်ကို တွေ့ဦးမယ် အစုတ်ပလုပ်မ” ကေသီကား ရှက်လွန်းသဖြင့် မျက်နှာပင်မဖော်နိုင်။
အပျိုဖျန်းလေးလို ဖြစ်နေသည်။ စိတ်ထဲကတော့ သူဇာဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းမကို နောက်တစ်ခါ သွားလည်မှ လက်ဆောင် ကောင်းကောင်းတွေ ဝယ်ပေး လိုက်ဦးမည်ဟု တွေးနေ လေတော့သည်။ (၈) “ကဲ ကိုလင်းထက်ရေ သွားပြီဗျို့” အိမ် ပေါက်ဝထိ သူ့ကို လိုက်ပို့ပြီး ကိုဇော်အောင်တို့ ပြန်သွားကြပြီ။ ခါတိုင်း ဒီလိုပြန်နေကျ ဖြစ်သော်လည်း ဒီနေ့အဖို့တော့ စိတ်ထဲမှ တထိတ်ထိတ် ခုန်နေ၏။ မနက်ခင်းက မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေး၊ ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ညနေစောင်းတွင် ကိုဇော်အောင်တို့ အုပ်စုက ခဲဖိုးဆိုပြီး သတို့သား ကိုယ်တိုင် လိုက်တိုက်ရမည် ဆိုသဖြင့်။ “မောင်လင်းထက်ရေ ကေသီက လာခဲ့တော့တဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်တွေ ဖောက်ကြည့်ရအောင် ဆိုလား” ဒေါ်မြမျက်နှာကလည်း ပြုံးစိစိ သူပင် ရှက်သလို ဖြစ်သွားသည်။
ခါတိုင်း အိမ် အပေါ်ထပ်ကို တက်လျှင် သွက်သွက်လက်လက် ဖြစ်သော်လည်း ယခုက ခြေထောက်များပင် အနည်းငယ် တုန်နေသည်။ အိမ် အပေါ်ထပ်က မမရဲ့ အခန်းထဲမှ ပြင်ဆင်ထားသော နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးပေါ်မှ မမကေသီကား စောင့်နေရော့မည်။ ခါတိုင်း မောင်နှမလို သဘောထားပြီး နေခဲ့စဉ်က ဘာမှမဖြစ်။ ယခု လင်မယားလို နေရတော့မည်ဆိုတော့။ “မမကျွန်တော်ပြန်လာပြီ” “ဝင်ခဲ့လေမောင်” မောင်တဲ့ အခေါ်က ပြောင်းသွားပြီ။ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမိသည်။ မမက ညအိပ်ဝတ်စုံ ဝတ်ထားသဖြင့် ရင်သားလေးများပင် ပေါ်နေသည်။ ခြေသလုံးလေးများက ဆင်စွယ်လိုပင် ဖြောင့်စင်းနေ၏။ မမက ခေါင်းကို ငုံ့နေ၏။ ရှက်သည် ထင်သည်။ သူ မမပါးကို ရွတ်ကနဲ့ နမ်းလိုက်သည်။ “အိုမောင်ရယ်” ကေသီက ချစ်သော မောင်၏ အနမ်းကို အနမ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပြန်လည် တုန့်ပြန်လိုက်၏။ မောင့်ကို ကုတင်ပေါ်ဖက်ရင်း လှဲချလိုက်သည်။ သူမအနေဖြင့် အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့် မောင့်လို လူပျိုရိုင်းလေးကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမည်ကို သိနေသည်။
သူမကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ပညာကုန် သင်ပေးခွင့်ကို ပိုင်ပိုင်ကြီး ရပြီလေ။ ညဝတ်စုံကို ချွတ်လိုက်သော အခါမှာတော့ သူမတစ်ကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွား၏။ မောင့်ကို ပက်လက်လှန်ပြီး အပေါ်မှ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ကာ တစ်ဖက်မှ မောင့်ပုဆိုးကို လျှောချလိုက်၏။ မောင့်ရဲ့ပစ္စည်းကို လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ မောင့်ပါးစပ်မှပင် အဟင်းဟင်း အသံထွက်လာ၏။ “မောင် မောင့်ညာဖက်လက်က မမခါးကိုကိုင်ထား တစ်ဖက်ကမမနို့တွေကိုကိုင် ငါ့မောင်ကို သင်ပေးတော့မယ် ခ်ခ်” မမကေသီ၏ ကိုယ်လုံး အလှကား အခန်းထဲမှာ မီးထွန်းထားသဖြင့် လင်းထက်အဖို့ အပြည့်အ၀ မြင်ရတော့သည်။ မမနို့နှစ်လုံးကား ပန်းရောင်ပြေးနေပြီး ဆံပင်များက နို့အပေါ် ဝဲကျနေသဖြင့် သူ့ငပဲကား မာတောင်နေအောင်ပင် ဖြစ်လာ၏။ မိန်းမနှင့် သူ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိ။ မမကေသီ ခိုင်းသည့်အတိုင်း သူ့ကို ပက်လက်လှန်ပြီး ခွထားသော မမကေသီ၏ နို့ကို တစ်ဖက်က ညစ်ပြီး နို့သီးလေးကို ချေပေးနေ၏။
မမကေသီ၏ စွင့်ကားနေသောတင်သားများကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်လိုက်သောအခါ မမကေသီက ဖင်ကို အနည်းငယ် ကြွကာ သူ့လီးကို ဘယ်လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင် လိုက်၏။ သူ့လီးကား ငရံ့အရှင်တစ်ကောင် ငါးမြှားချိပ်မှာ မိနေသလို တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေပြီး အရည်ကြည်လေးများ စိမ့်ထွက် နေပြီဖြစ်သည်။ “ခ်ခ် မောင့်ကောင်လေးကလည်း မောင့်လို လူဆိုးလေးပဲနော် ကြည့် ထိန်းမရချင်ဘူး ဒီတော့ ငြိမ်သွားအောင်” မမကေသီကား မထင်ရ။ တစ်ခါ အိုပြီးသားမို့လား မသိ။ အပြောအဆိုတွေက ရဲတင်းလှ၏။ ကေသီအဖို့မှာတော့ ချစ်သောမောင်၏ ကောင်လေးကို လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး အဖုတ်ဝတွင် တေ့ကာ ထိပ်ဖျားလေးကို ပွတ်ဆွဲပေးနေ၏။ မောင့်ထံမှ အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းလာသည်။
မောင့်လီးက ဆုံးသွားသာ သူ့ကိုကြီးလီးထက် ကြီးသည်။ သူမလက်ထဲတွင်ပင် ခန့်မှန်း ၅လက်မကျော် ၆လက်မနီးနီးဟု ထင်သည်။ ကျပ်လုံးခန့် တုတ်သည်။ လူပျိုလေးမှန်းတော့ သိသာသည်။ လီးထိပ်မှာ အရေပြားလေးတွေပင် ဖုံးနေသေး၏။ ချစ်လှစွာသော မောင့်ရဲ့ လီးကိုကိုင်ကာ သူမအဖုတ်ထဲသို့ သူမကိုယ်တိုင် ကိုင်တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း သွင်းလိုက်ချိန်တွင် မောင်မျက်လုံးတွေ မှိတ်သွား၏။ အောက်မှ ကော့ကာ တက်လာတာကို တွေ့၏။ လက်တစ်ဖက်က ခါးကို ကိုင်ထားရာမှ နောက်နို့တစ်လုံးပေါ် လက် ကိုင်လိုက်သဖြင့် နို့နှလုံးစလုံးကို မောင် ညစ်လာတာကို သတိထားမိသည်။ သူမ လက်နှစ်ဖက်က မောင့်ရင်ဘတ်ပေါ် ခပ်ဖွဖွထောက်ရင်း အဖုတ်ထဲစိုက်ထားသော လီးကို ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပေး နေလိုက်၏။ လူပျိုစစ်စစ်လေးမို့ ထင်သည်။ လီးကတော့ သံချောင်းသဖွယ် မာနေပြီး အဖုတ်ထဲမှာ ကျပ်နေသည်။ “ဖွတ်ဖွတ် ပလွတ်ပလွတ်” မောင့် လဥနှင့် သူမဆီးခုံ ရိုက်သံက စည်းချက်မှန်မှန် အခန်းထဲမှ ထွက်လာသည်။
သူမ စောက်ခေါင်ထဲမှ ထွက်လာသော အရည်ကြည်လေးများနှင့် မောင့်လီးထိပ်မှ ရှေ့ပြေးထွက်လာသော အရည်ကြည်လေးများ ပေါင်းကာ အသံ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လင်းထက်ကားအောက်မှနေပြီး သူ၏ လူပျိုစစ်စစ်လီးလေး မမ၏ အဖုတ်ထဲစိုက်ဝင်သွားချိန်တွင် ခံစားရသော အရသာကိုတော့ သူ့တစ်သက် မမေ့နိုင်တော့တာအမှန်။ ချစ်လှစွာသော မမ၏ ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ သူမိန်းမောနေသည်။ ကိုဇော်အောင်က ဘက်ချလာနိုက် သွားလုပ်စဉ် သူ့အရက်ထဲမှာ ဆေးတစ်မျိုး ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ဘာဆေးမှန်းတော့မသိ အဲ့လိုလုပ်ရင်ကြာ တယ်။ ခွန်အားအပြည့်ပဲ ဟုပြောသည်။ သူလည်း သောက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ထင်သည်။ သူ မထွက်နိုင်သေး မမလို ဝါရင့်သမားက သူ့ကို ဦးဆောင်မှာပဲ ဟုပြောလိုက်တာ တကယ်မှန်သည်။
မမကား ကိုကြီးနှင့် ကလေးမရခဲ့သဖြင့်ထင်သည်။ မမ အပေါက်လေးက အပျိုလို ကျဉ်းနေသည်။ သူ့၏ အကြော တပြီုင်းပြိုင်းနှင့် ထောင်ထ နေသော လီးကြီးက မမ စောက်ခေါင်း ကြပ်ကြပ်လေးထဲ ဝင်သွားသောအချိန်တွင် မမ၏ ပန်းနုရောင် စောက်ပတ် နှစ်ခြမ်းက သူ့လီးကို ညှပ်ညှပ်ပြီး ဆွဲယူနေသည်။ အချက် လေးငါးဆယ်ခန့် ဆောင့်ပြီးချိန်တွင်တော့ သူ့လီး ထိပ်ဖျားက ကျဉ်လာသလို မမကေသီ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း ပိုသွက်လာ၏။ ပြွတ်ပြွတ်ဘုတ်ဘုတ် အားအား အင်းအင်းဟင်းဟင်း။ ညဉ်းသံများ ပြီုင်တူ ထွက်လာပြီး မမကေသီကား စောက်ရည်များ ပန်းထွက်ကာ တစ်ချီပြီးသွားသလို သူ့လီးထဲမှ လရေများကို ချစ်လှစွာတော မမ၏ စောက်ခေါင်း အတွင်းသို့ ပန်းထုတ် လိုက်လေတော့သည်။ ကေသီကား တစ်ချီထွက်ပြီးနောက် အနည်းငယ် မောသွားသည်။ လင်းထက်ကို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့ပြီး နမ်းလိုက်ပြီး “မောင့်ကို မမသိပ်ချစ်တာဘဲ သိလား” “မောင်လည်း မကို အရမ်းချစ် တယ်။
ကိုကြီးမရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာ ကိုကြီးကိုယ်စား မမဘဝကို စောင့်ရှောက်ခွင့် ရတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းပျော် တယ်။” “ဟွန်း စောင့်ရှောက်တာကြီးကလည်းနော် ခ်ခ်” “ဘာလဲ မမကမကြိုက်လို့လား” “ဟင်းမောင်နော်” မမကေသီကား အနည်းငယ် ရှက်သွားသည်။ “အဟဲ ကျွန်တော်က စတာပါ မမကို” “သိပါ တယ် မောင်ရယ်” “ဟင်းပြောမို့သာ ပြောရတာပါ မမက အိုပြီးသား ဆိုတော့ ငါ့မောင်က ပစ်သွားမှာကို မမစိုးရိမ်မိ တယ်။ ငါ့မောင်ကလူပျိုလေ ပြီးတော့ ရုပ်ကလည်း ချောတော ကောင်မလေးတွေက စိတ်ဝင်စား ကြတယ်။” ဒီလို ပြောလာတော့ မမကေသီကို လင်းထက်သနားမိသည်။
မမကေသီကား အားငယ် နေရှာသူပင်။ “အိုမမရယ် ဒါမျိုးစကား နောက် မပြောပါနဲ့” “ကျွန်တော် မမကိုချစ်လို့ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲ မမကေသီက အရမ်းလှတော့ မမကို ဆုံးရှုံးရမှာကို ကျွန်တော် အရမ်းကြောက်ခဲ့တာ မမကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ ပစ်မသွားဘူး သိလား” ဒီလို ပြောလာတော့လည်း ကေသီရင်ထဲ ကြည်နူး သွားတာပေါ့။ သြော် ချစ်ရတဲ့မောင်ရယ် မင်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရတာနဲ့တင် မမဘဝက သေပျော်ပါပြီဟု ရင်ထဲကနေ ပြောနေမိ တယ်။ ထိုသို့ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာတင် ကေသီရဲ့ပါးကို မောင်က နမ်းနေ တယ်။ အို လည်ဂုတ်သားလေးတွေကိုပါ လိုက်နမ်းနေတော့ ကေသီ အနေရ ခက်လာပြန် တယ်။ မောင် အင်းဟင်းဟင်း ။ လင်းထက်က လည်ဂုတ်ကနေ လျှောဆင်းပြီး ကေသီရဲ့နို့တွေကို စို့ပေးနေပါ တယ်။ ကေသီရဲ့ ဖြူဝင်းပြီး ပန်းရောင် ပြေးနေတဲ့ နို့သီးထိပ်လေးတွေကို စုပ်ပေး နေတာကြောင့် ကေသီ တစ်ယောက် ခါးချိုး ခံရတဲ့ မြွေတစ်ကောင်လို တွန့်လိမ် နေပါ တယ်။ ပြီးတော့ ဗိုက်သား ဖြူဖြူဝင်းဝင်း လေးတွေကို လိုက်နမ်း နေပါ တယ်။ “အို မောင်ယား တယ်။
ခိခိ” လင်းထက်လည်း မမကေသီရဲ့ ရွှေရောင်အမွေးနုလေးတွေနဲ့ လိမ်ကောက်နေတဲ့ ရတနာလေးကို မျက်နှာ အပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မမကေသီက သူ့ခေါင်းကို တွန်းလိုက်ပါတယ်။ “အို မောင်မလုပ်နဲ့ မောင် ဘုန်းနိမ့် ကုန်လိုက်မယ် မမငရဲကြီးကုန်မယ်” “အို မမကလည်း ချစ်လို့ လုပ်ပေးတဲ့ဟာကို” ကေသီရင်ထဲကြည်နူးသွားပါ တယ်။ ကိုမောင်တုန်းကတောင် တစ်ခါမှ သူမကို ဘာဂျာ မမှုတ်ပေးဘူးပါဘူး သူ့မွေးစားညီ လင်းထက်နဲ့မှ ခံစားရတော့တယ်။ လင်းထက်လဲ ချစ်လှစွာသော မမကေသီရဲ့ ပိပိလေးကို ပါးစပ်နဲ့တေ့ပြီး သေချာမှုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေက ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ မြင်နေကျပေမဲ့ အခုမှ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခွင့် ရတာပါ။.
“ရှီး အ အ မောင် ယား တယ်။ မလုပ်နဲ့တော့ မမမခံနိုင်ဘူး မောင့်ဟာန လုပ်ပေးတော့” လင်းထက် မှုတ်တာနားတဲ့အချိန်မှာ သူ့လီးကလည်း အစွမ်းကုန် ထောင်နေပါပြီ။ မမကေသီက “ဒီတစ်ခါပုံစံ ပြောင်းရအောင်မောင် မောင် ကုတင်အောင်ဆင်းပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက် မမက ကုတင်ပေါ် ကုန်းပေးထားမယ်” လင်းထက် ကုတင်အောက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာ မမကေသီက ကုတင်ပေါ်မှာ လေးဖက် ထောက်ပေးထားပါ တယ်။ မမကေသီက လင်းထက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို သူမ ခါးကို ကိုင်ခိုင်းထားပါ တယ်။ “မောင် ဒါမှစည်းချက်ညီမှာ မောင် သွက်သွက်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရမှာ” မမကေသီရဲ့ ကုန်းထားတဲ့ဖင်က လုံးဝန်းနေတာပါ ခါးက သိမ်တဲ့အတွက် တင်ပါးတွေက စွင့်ပြီးကားထွက်ပြီး ရမက်ကြွစရာ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကို အအိုပါလို့ တစ်ခြားသူမြင်ရင် ယုံမှာ မဟုတ်ကြပါဘူး။
ကေသီကား ကုတင်ပေါ်မှာ လေးဖက်ထောက် အနေအထားပြီး မောင်က မတ်တပ် ရပ်ထားတာမို့ မောင့်ရဲ့လီးဟာ ကေသီကုန်းထားတဲ့ အဖုတ်နဲ့ တန်း နေတာပါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မောင်က လုပ်တာကျွမ်းကျင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မောင့်လီးကို ကေသီရဲ့ နောက်မှပြူထွက်နေတဲ့အဖုတ်လေးကို ထိုးထည့် လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ကေသီရဲ့ ပန်းရောင်အဖုတ် နှစ်ခြမ်းက ဟသွားပြီး မောင့်လီးကို ကေသီက ညစ်ပေး နေသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် မောင့် အဖို့လဲ တဟင်းဟင်း ဖြစ်နေပါ တယ်။ “မောင် ဆောင့်တော့လေ” လင်းထက်ဟာ မမကေသီရဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး သူ့ လီးလေးကို မမကေသီ အဖုတ်ထဲ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်လာပါ တယ်။ ပထမတော့ ဖြည်းဖြည်းလေး လုပ်နေတာမို့ မောင် မမကိုမညှာပါနဲ့ ကြမ်းကြမ်းဆောင့် လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အခါမှာ လင်းထက်ဟာ မမကေသီခါးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရကိုင်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်ပါတော့ တယ်။
ဘွတ်ဘွတ်ဘတ်ဘတ် ။ အားဟင်း အိုအိုး မမကေသီဟာ နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်လုမတတ် ကိုက်ထားပြီး လင်းထက်ရဲ့ ဆောင့်ပေးတာကို အားရပါးရ ခံနေပါ တယ်။ ဟွန်း သူ့အကိုကြီးထက် ဆောင့်အား ကောင်းတယ်။ မြန်နေတာပဲ လို့ တွေးမိ တယ်။ လင်းထက် ဆောင့်လိုက်တိုင်း မမကေသီထံမှ တအင်းအင်းညည်းသံတွေ ထွက်ပေါ်နေသလို သူ့ ဥတွေဟာ မမကေသီရဲ့ ဖင်နှစ်ခြမ်းကို သွားသွားရိုက်ပါ တယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ဥနဲ့ဖင်နဲ့ ရိုက်သံကလည်း တစ်ဘတ်ဘတ်နဲ့ ထွက်ပေါ်နေသလို ကုတင်ကြီးကလည်း တကျီကျီနဲ့ အသံထွက် နေပါ တယ်။ မမကေသီရဲ့ အဖုတ်လေးထဲက သွေးကြောမျှင်လေးတွေဟာ လင်းထက် လိင်တံကြိးကို ညှစ်ညှစ် ပေးနေတာကြောင့် လင်းထက် အဖို့တော့ နတ်ပြည် ရောက်သလိုပေါ့။ သူ့အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကဆို မမကေသီကို ဒီလိုလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်မိန်းမ ဆိုပြီး စိတ်နဲ့တောင် ပစ်မှားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုကြီးဦးမောင် ဆုံးသွားပြီးတဲ့ နောက်မှ သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ သူတို့မောင်နှမဟာ စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာပြီး ဘင်္ဂလားမောင်နှမ ဖြစ်သွားကြတာပေါ့။
ကေသီကလည်း အရွယ်ကောင်းမုဆိုးမ။ လင်းထက်ကလည်း လူပျိုရိုင်းလေး။ သံယောဇဉ်အခံကလည်းရှိ ဆိုတော့ လင်မယား ဖြစ်သွားကြတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ လင်းထက်က နောက်ထပ် အချက်(၃၀)လောက် ထပ်ဆောင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှ မမကေသီအဖုတ်က သူ့လီးကို အတင်းညစ်ထုတ်ပြီး မမကေသီရဲ့ ညှစ်အားက လျှောသွားပြီး သူမရဲ့အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ ထွက်လာသလို လင်းထက် လီးထဲမှလည်း လရေတွေ ပန်းထွက်ပြီး နှစ်ယောက်သား မောမောပန်းပန်းနဲ့ ကုတင်ပေါ်ကို ထပ်လျက်သား လဲကျ သွားကြပါတော့ တယ်။ (၉) မနက်ခင်းလေးမှာ ကေသီဟာ အရင်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။
ဘေးမှာ မောင်ကတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေပြီး မျက်နှာလေးက အပြစ်ကင်းစင်နေပါတယ်။ မနက် (၄)နာရီလောက်မှာ မောင်က တစ်ခါထပ်လုပ်တာကို တွေးမိပြီး ကေသီ ပြုံးလိုက်မိ တယ်။ အရူးလေးကို အမဲသားကျွေးမိသလိုပဲ။ ဟင်း လူဆိုးလေး ။ မောင့်ရဲ့နဖူးလေးကို ကေသီက ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်ပြီး မောင်မနိုးအောင် အိပ်ယာမှ အသာ ထလာခဲ့ပါ တယ်။ အောက်မှာ အိမ်ကထမင်းချက် ဒေါ်မြနဲ့ အိမ်ဖော်မလေး မိအေးတို့ကတော့ နိုးနေပါပြီ။ “ဒေါ်လေးမြရေ မောင့်အတွက် ကော်ဖီဖျော်ပြီးဓါတ်ဘူးထဲထည့်ထားလိုက်တော။ မိအေးရေ နင့်အကို အတွက် ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ် မီးကင်ပြီး ကြက်ဥနှလုံး မကျက်တကျက်ကြော်ထားနော်” ကေသီကား တစာစာ မှာနေပါတယ်။
“ဟင်းဟင်း အဖြစ်သဲနေလိုက်တာသမီးရယ် ကြီးမြသိပါ တယ်။ မောင်လင်းထက်ကို တော်တော်ချစ်တန်းလည်း မသိဘူး ရှက်လိုက်တာ” ကေသီတစ်ယောက်ညကအဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်နှာလေးရဲတွတ်ပြီး ထမင်းစားခန်းထဲက ထွက်ခဲ့ တယ်။ ညက အရှက်ကုန်ခဲ့ပေမဲ့ မနက်ရောက်တော့ ရှက်တာပေါ့လို့။ “ခ်ခ် ကေသီရေ ခလုပ်လဲ တိုက်နေဦးမယ်” ဒေါ်လေးမြက ဒါတောင်လှမ်းစဖြစ်အောင် စလိုက်ပါသေး တယ်။ ကိုကြီးနဲ့ မင်္ဂလာ ဆောင်ခဲ့တုန်းကတောင် မရှက်ဖူးပါဘူး ကိုကြီးဆုံးလို့ သူ့မွေးစားညီ လင်းထက်နဲ့ယူမှပဲ သူမ ရှက်သလိုလို ဖြစ်နေသည်။ ညကအဖြစ်တွေကို စဉ်းစားမိရင်း ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာမှာ ထိုင်ရင်းစဉ်းစားနေတာ။ အို ရှက်လိုက်တာ ညကသူမအရှက်နည်းခဲ့ပေမဲ့ အခုကျတော့ ရှက်သွေးလေးတွေ တက်နေသည်။
တကယ်တော့ မောင့်ကို သူမ ချစ်လွန်းလို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာ မဟုတ်လား။ အပျိုမဟုတ်ပေမဲ့ သူမခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို လင်းထက်ကို ပုံအပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်မိ တယ်။ “ပြောပါစေ လူတွေ ဝိုင်းပြောပါစေ သိပ်ချစ်လွန်းလို့ မောင့်နောက်လိုက်ခဲ့မယ် ကျွန်မကို မောင်သက်ဆုံးတိုင် မဆုံးတဲ့ အချစ်နဲ့ အမြဲတမ်းချစ်နေပါ” ဖုန်းသံကြောင့် အတွေး ဝင်နေသောကေသီ လန့်သွားသည်။ “စောစောစီးစီးဘယ်သူပါလိမ့်” သူမသူငယ်ချင်းသူဇာဆီက။ ဟင်း နောက်တော့မယ်။ မကိုင်မချင်းခေါ်မှာ သိတာကြောင့် “ဟဲလို သူဇာ ကောင်မစုတ် လန့်သွားတာပဲ ပြော စောစောစီးစီး” “အမလေးဟဲ့ ခေါ်မိတာကိုက ငါ့အမှား ဖြစ်ရ တယ်တကယ်ပဲ နင်များ ဂိုးသွင်း ခံနေရတုန်းလား လို့ ဟဲ” “အိုရှက်လိုက်တာ” သူဇာကပြန်အော်တာကြောင့် သူမရှက်သွား သေးသည်။
“ဘယ်လိုလဲ ညက နင့်မောင်လေး ဂိုးသွင်းကောင်းရဲ့လား” “အို ရှက် တယ်” “အံမယ် နင်ကပဲရှက်ရတယ် ရှိသေး။ မသကာနင့် မောင်လေးက ရှက်တယ်ဆို တော်သေး။ ကောင်မနော်။ နင့်အကြောင်း ငါသိတယ် ဟင်းဟင်း” “နင်က ရွတတနဲ့ အိုကလည်း အိုပြီးသား ဆိုတော့ နင့်မောင်လေးကို လက်ကုန် သင်ပေးလိုက်ရဲ့လား” သူဇာ အပြောတွေကြောင့် ကေသီလည်း ရှက်ရှက်နှင့်ပင် “ဟုတ် တယ်။ ကောင်မရေဟုတ် တယ်။ ငါ့ချစ်သော မောင်လေးကတော့ ပျော့ဖတ်သွားတာပဲ” “ဒါနဲ့ နင့်ပေါင်တွေ တင်ပါးတွေ ရောနာနေရော ဆိုပါတော့” “ဟင်း သူဇာနော် ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ရှက်တယ်။ ရှက် တယ်။ နင့်အိမ် လာလည်မှ မေးတော့ သိပြီလား” ဟုဆိုကာ ကေသီဖုန်းကို ချလိုက်ပါတော့ တယ်။
လင်းထက် နိုးလာတဲ့ အချိန်မှ မမ အခန်းထဲမှာ မရှိတော့ပါဘူး ညကမမနဲ့ ချစ်တမ်း ကစားတာများလို့ ကိုယ်တွေ နည်းနည်းနာနေ တယ်။ ဒါနဲ့ မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့အခါမှာ မမကရေချိုးပြီးစ သဘက်လေးနဲ့ သူမဆံပင်တွေကို ပြူတင်းပေါက်နားမှာ သုတ်နေတာကြောင့် သူလာတာ သတိမထားမိပါဘူး။ မမကေသီဟာ ထမိန်ရင်လျားလေးနဲ့ ဖြစ်နေတာကြောင့် သူ့ရင်ခုန်သံတွေ မြန်သွားပါ တယ်။ ဒါနဲ့ သူလည်း မမကေသီနောက်ဖက်ကနေသွားပြီး မမကေသီရဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ နောက်ကနေ ဖက် လိုက်ပါတယ်။ “အို အမေ့ မောင်ရယ် လန့်သွားတာပဲ” “ညကတော့ မလန့်ဘူးနော်” မမကေသီ မျက်နှာလေး ရဲသွားပါ တယ်။ “သွား လူဆိုးလေး ဘာတွေမေးမှန်းမသိဘူး မျက်နှာ သစ်ချေတော” သူလည်း မမကေသီနဖူးကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်ပါတယ်။ မမကေသီက “မောင် ကော်ဖီသောက်ဖို့ ပြင်ပေးထားပြီးပြီ ပြီးတော့ မောင်ရုံးသွားရင်ဝတ်ဖို့ ပုဆိုးနဲ့အင်္ကျီနဲ့ အခန်းထဲက အဝတ်စင်ပေါ်မှာ မီးပူထိုးပြီး ဖြန့်ပေး ထားတယ်။” “ဟုတ်ပါပြီမမရယ် ဒါကြောင့် မမကိုချစ်တာ သိလား” “သွား အာပုတ်စော်နံ တယ်။” ကေသီက ဒီလိုသာ ပြောနေတာပါ ချစ်သောမောင်ရဲ့ ပွေ့ဖက်မှုကို အမြဲတမ်း ခံချင်နေတာပါ မောင်ရယ်ဟု စိတ်ထဲမှ တိုးတိုးလေး ပြောနေမိပါ တယ်။
(၁၀) သူဇာကား ကြည့်ရင်းနှင့်ပင် ဖီးလ်တက်နေသည်။ နေ့လည်က ကေသီ လာလည်သွားသည်။ ကေသီနှင့်သူမကား ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ ပြောမနာဆိုမလာတွေလေ။ ဟိုနေ့က ကေသီနဲ့ သူ့အရင်ယောင်္ကျား ကိုကြီးမောင်တို့ ညီမောင် ကေသီ ဘင်္ဂလားမောင်လေး လင်းထက်နဲ့ နောက်အိမ်ထောင် ပြုသွားသော ကေသီက သူမ မင်္ဂလားဦးညက အခန်းထဲမှာ သူ့မောင် မသိအောင် မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာ ဖုန်းကိုတိပ်နဲ့ကပ်ပြီး ရိုက်ထားတာ တဲ့လေ။ မီးအလင်းရောင်ကလည်း ထင်းနေတာကြောင့် သူမတို့လင်မယား ဘယ်လို လုပ်သည် ဆိုတာကို သူဇာကို လာကြွား သွားချင်းဖြစ်သည်။ သူဇာအဖို့ လင်းထက်က ကေသီကို လုပ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး သူမပင် ကေသီနေရာမှာ အစားထိုး ဝင်ချင်စိတ်တွေ အရှင်လတ်လတ် ဖြစ်ပေါ်သွားသည်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းထဲသို့ ဖိုင်ကိုကူးထားပြီး ပြန်ကြည့် နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ သားနှင့်သမီးက ကျောင်းသွားကြပြီ။
ကိုဇော်အောင်ကလည်း ယခုနှစ်ပိုင်းများတွင် အိမ်ထောင်သက် ကြာလာ သောကြောင့်လားမသိ။ ညအိပ်ရင်တောင် မလုပ်ဖြစ်တဲ့ ရက်တွေက များနေပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ သူမမှာကလည်း အသက်(၄၀)ခန့် သွေးသား ဆူဖြိုးဆဲအရွယ် ဆိုတော့ ဒီလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ထားတာကို မြင်တော့ ကာမစိတ်တွေ ထကြွလာသည်။ သူမ စိတ်ထဲကတော့ ဖြစ်နေပြီ သူ့ယောင်္ကျား ကိုဇော်အောင်နဲ့တော့မဟုတ် လင်းထက်နဲ့ အလုပ်ခံချင်နေတာ ဖြစ်သည်။ ကေသီကို လေးဖက်ထောက်ပြီး ဆော်သောအခန်းမှာ အပေါ်မှ ရိုက်ထားသဖြင့် ကေသီအပေါက်ထဲကို လင်းထက်ရဲ့ ပစ္စည်းကြီး ဝင်နေတာကို တွေ့နေရတော့ ကြည့်ရုံနဲ့ပင် လင်းထက်ပစ္စည်းက သူမယောင်္ကျား ကိုဇော်အောင်ထက် ကြီးတာကို တွေ့နေရသည်။
သူဇာ နေမကောင်းဘူးကြားသဖြင့် ကေသီကား သူဇာအိမ်ကို သွားသောအခါ အပေါ်ထပ်မှာဟု ဆိုသဖြင့် အိမ်အပေါ်ထပ် တက်ခဲ့သည်။ ကိုဇော်အောင်က အလုပ်သွားပြီနေမှာ မိန်းမ နေမကောင်းတာတောင် ဂရုမစိုက်တဲ့လူပဲ။ “သူဇာရေ သူဇာ” “ဝင်ခဲ့တော့ ကေသီရေ” အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းမ သူဇာက ခွေခွေလေးလဲနေသည်။ “နင် ဘာဖြစ်နေတာလည်းသူဇာ ဆေးခန်း မသွားဘူးလား” “အင်း ငါမပြောချင်ပါဘူးဟာ ငါ့ရောဂါက ဆေးထိုးလည်း ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ကေသီကား အံသြသွားသည်။ “နင်ကလည်း စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ စကားတွေမပြောပါနဲ့ ကဲ နင်ဘာဖြစ်နေတာလည်း ပြော ငါကူညီနိုင်ရင် ကူညီမှာပေါ့” သူဇာကား မျက်နှာလေး ဝင်းလက် သွားပြီး “နင် တကယ်ကူညီမှာလား ကေသီ” “တကယ်ပါ ငါကတိပေး တယ်” “အဲ့ဒါဆိုရင် ငါပြောပါ့မယ်ဟာ” “အဓိက တရားခံက နင်ပဲကေသီ နင်လေ လင်းထက်နဲ့ မင်္ဂလာဦးညက ရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ငါ ကြည့်ပြီး ကတည်းကလေ ငါ ငါလေ နင့်မောင်ကို xxx ဖြစ်သွား တယ်။ ငါမနေနိုင်ဘူးဟာ ရူးလိမ့်မယ်။
ဟင့်ဟင့် အီးဟီးဟီး နင်မကူညီနိုင်ပါဘူး ကေသီရယ် ငါဆိုလည်း နင့်နေရာမှာ ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါ” သူဇာကား မျက်ရည်တွေ တလိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာကာ ငိုတော့သည်။ ကေသီကား သူငယ်ချင်းမ သူဇာကို တော်တော် သနားသွားသည်။ “တိတ်ပါ သူဇာရယ် ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ နင်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော် ဖြစ်ရလေငါ့သူငယ်ချင်းလေးရယ် ငါ့အပြစ်ပါ သူဇာရယ် တိတ်တိတ် ငါကူညီပါ့မယ် ငါမောင့်ကို အရမ်းချစ်သလို နင်ကလည်း အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းလေဟာ မောင်က ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ပြီး တစ်ခြားမိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့တော့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့် ငါကြံပါ့မယ်” ကေသီကား သူဇာကိုဖက်ပြီး ချော့မော့ နေလေတော့သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မောင့်ကို နှမျှောပေမဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ သူမ သူငယ်ချင်းကို ကူညီမယ်လို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တော့သည်။
(၁၁) လင်းထက် တစ်ယောက်တော့ဖြင့် အခက်တွေ့ချေပြီ။ သူ့ရဲ့ချစ်လှစွာသော မမကေသီကား တစ်ညတွင် သူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်း အကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ ကြားခါစ ယုံပင်မယုံနိုင်။ ကိုဇော်အောင်ကလည်း သူ့မိတ်ဆွေ။ ဒေါ်သူဇာကို ထင်ပင်မထင်ထားမိ။ သူမ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သူ၏ ချစ်လှစွာသော မမကေသီမှ ပြောသဖြင့်သာ သူယုံ၏။ မမကေသီကတော့ သူ့ကို မောင့်သဘောပါ မောင်ရယ် ဒါပေမဲ့ မမဆန္ဒကတော့ ကူညီစေချင်တယ် ဟုပြော၏။ ဒါပေမဲ့ သူ မမကေသီကို သစ္စာမဖောက်ချင်ပါ။ မမကေသီက သူဇာက သနားစရာပါ မောင်ရယ် ဟူသော စကားက မထွက်သည်အပြင် မမကေသီ မျက်နှာလေး ညိုးနေတာကြောင့် သူ့အနေဖြင့် ကူညီမယ် လို့ ပြောခဲ့သည်။ ပြောမယ်သာ ပြောရသာ မသူဇာကလည်း တော်တော်လှသည်။ ကလေး(၂)ယောက်အမေလို့သာ ပြောသည်။ ဖင်က မကျ တစ်သားမွေး တစ်သွေးလှ ဆိုတာမျိုး ထင်သည်။ ကိုဇော်အောင်က အပြင်မှာ နေတာများတော့ သူ့မိန်းမကို ဂရုမစိုက်ဖူး ထင်တယ်။ နောက်ဆုံး ကေသီကိုယ်တိုင် စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် သူနှင့်သူဇာ တည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ ချိန်းခဲ့ကြသည်။ သူဇာက ကိုဇော်အောင်ကို တစ်ခြားမြို့ သွားလည်မည်ဟု ပြောခဲ့ပြီး မြို့စွန်က တိုက်ခန်းမှာ ချိန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်။ တံခါး ခေါက်သံကြောင့် သူဇာရင်တွေ တဒုံးဒုံးခုန်လာသည်။ လင်းထက် လာပြီထင်သည်။ ဒီနေ့တော့ သူ့သူငယ်ချင်း ကေသီကို လုပ်သလို သူမကို လုပ်တော့မည်ကို တွေးပြီး သူမအဖုတ်လေးထဲမှာပင် တွေးယုံနှင့် ရွစိစိဖြစ်လာသည်။ လင်းထက်ကား အခန်းထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်တော့ သူဇာက အခန်းတံခါးကို လှမ်းပိတ်လိုက်သည်။ သူဇာကား ဘာစကားမှ မပြောပဲ သူ့ကို ရင်ဘတ်ခြင်းတေ့ပြီး ပုဆိုးကို လှမ်းဆွဲချွတ်လိုသည်။ သူကလည်း အားကျမခံသူဇာ၏။ အင်္ကျီကို လှမ်းချွတ်လိုက်သည်။ ဒီအချိန်မှာ မသူဇာကို ကိုဇော်အောင်မိန်းမ ဆိုတာ မေ့နေပြီ။ မသူဇာကား မမကေသီလို ရုပ်သိပ်မချောပေမဲ့ မမကေသီ နီးနီးလောက် လှတာတော့အမှန်။ ကလေးမွေးခဲ့ပြီးသူမို့ ထင်သည်။ နို့နှစ်လုံးပေါ်တွင် နို့သီးညိုတိုတိုလေးများက ထောင်ထနေသည်။ ဖင်ကြီးကလည်း မသူဇာက မမကေသီထက် ကြီးသည်။ သူ့ရဲ့ လိင်တံကြီးကို မသူဇာက လက်ဖြင့် ဖျစ်ညစ်လိုက်သည်။ အအား သူမခံနိုင်။ ချက်ချင်းကို ငပဲက ထောင်မတ် လာသည်။ သူဇာက လင်းထက်ကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲလိုက်သည်။
လင်းထက်ရဲ့ လီးကြီးကား သူမကေသီဆီက ရခဲ့သော ဗွီဒီယိုထဲကထက်ကြီးနေပြီး ဒစ်လည်း ပြုတ်နေပြီ ကေသီ၏။ သင်ကြားပြသမှု ကောင်းသောကြောင့် ထင်သည်။ “မောင် ငြိမ်ငြိမ်နေ မမ မင်းကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်” လင်းထက်က မသူဇာ ဘာလုပ်မည်ကို မသိ။ သူဇာကား လင်းထက်၏။ ခြောက်လက်မနီးနီး ရှိနေပြီဖြစ်သော လိင်တံကြီးကို နှုတ်ခမ်းထိပ်တွင် တေ့လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်မွာကြားသို့ သွင်းလိုက်သည်။ လင်းထက်ရဲ့လိင်တံကြီးကား သူမ၏ နီထွေးသော နှုတ်ခမ်းထဲသို့ ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။ ချစ်လှစွာသော လင်းထက်ရဲ့လီး ဖြစ်တာကြောင့် သူဇာကား စိတ်ပါလက်ပါ ပြုစုနေသည်။ လင်းထက်ကား မျက်လုံးကြီးမေးပြီး သူဇာရဲ့ ဆံပင်ကြားကို လက်ကလေးထိုးဖွပြီး ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ သူဇာကား လင်းထက်ရဲ့ လီးဒစ်ကို ပတ်ပတ်လည် လျှာလေးနဲ့ ဝေ့ဝိုက်ပြီး လှည့်ပတ် ယက်ပေးတာကြောင့် လင်းထက်ကား ဆွေမျိုး မေ့သွားသည်။ စီစဉ်ပေးသော မမကေသီကိုပင် ကျေးဇူး တင်မိသွားသည်။ နောက်ဆုံး လီးထဲမှ သုတ်ရည်တွေပင် မထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ပန်းထွက် ကုန်တော့သည်။ မသူဇာက သူ့ဘေးမှာ ယှဉ်လှဲတဲ့အချိန်မှာ မသူဇာရဲ့ နို့သီး ချွန်ချွန်လေးတွေကို လျှာနဲ့ ဝေ့ဝိုက်ပြီး သူက ယက်ပေးသလို လက်တစ်ဖက်ကလည်း နို့သီးတစ်လုံးကို လက်ညိုးနဲ့လက်မ ညှပ်ပြီး ချေပေးနေပါတယ်။
အို မောင့် အ အ သူဇာကား တအီးအီးတအားအား ဖြစ်နေပါတယ်။ သူလည်း ထပ်ပြီး သူဇာရဲ့ပေါင်ကြားထဲက အဖုတ်လးကို လျှာနဲ့အပြားလိုက် ယက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ အင်း ဟင်းဟင်း ခိခိ ယား တယ်။ မောင်ရဲ့ ရပ်ပါတော့ အိုးအိုး သူ့ခေါင်းကို အတင်းတွန်းထုတ်ပေမဲ့ သူက သူဇာပေါင်ကို ဖိပြီး အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကို (၅)မိနစ်လောက် ဆက်တိုက် ယက်တဲ့အခါမှာတော့ သူဇာက အင်းအင်းအားအား ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်ရင်း တစ်ချိ ပြီးသွားပါတယ်။ အို မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ။ လင်းထက်ကား မသူဇာကို ကြည့်ပြီး သူ့လီးက ရုန်းကြွလာပါ တယ်။ မသူဇာကို ပညာ နည်းနည်းပြမှပါ။ “ကဲ မမ ပက်လက်လှန်ပြီး ခါးအောက်ကြွလိုက်” လင်းထက်က မသူဇာရဲ့ ခါးအောက်ကို တခြားကုတင်ပေါ်က ခေါင်းဦးနှစ်လုံးကို ခံလိုက်ပါတယ်။ သူဇာအဖို့ ပက်လက် အနေအထားမှာ ခါးအောက်မှာ ခေါင်းအုံးနှစ်လုံး ဆင့်ခံ ထားတဲ့အတွက် ခေါင်းက အောက်ရောက်နေပြီး ခါးက ကော့ထားသလို ဖြစ်နေပါ တယ်။
လင်းထက်က သူမခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး သူ့လီးနဲ့ သူမစောက်ပတ် အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် (၅)မိနစ်ခန့် ပွတ်ပေးလိုက်တာန သူဇာဟာ အလိုးခံချင်လို့ ယွလာပါတယ်။ လင်းထက်က သူမကိုညဉ်းနေတာပါ။ အင်းဟင်းဟင်း လုပ်ပါတော့မောင်ရယ် မမကို သနားပါ လုပ်ပါတော့ တောင်းပန်ပါ တယ်။ လင်းထက်လည်း မသူဇာရဲ့ အဖုတ်ဝကို လီးနဲ့ သေချာချိန်ပြီး ဆောင့်သွင်း လိုက်ပါ တယ်။ လင်းထက်ရဲ့လိင်တံကြီးဟာ အဖုတ်ထဲ အရှိန်နဲ့ တိုးဝင်သွားပြီး ဗြစ် ဘုတ်ဘုတ် အင့်အင် အအ မောင် မမ အဖုတ်လေးတော့ ကွဲပြီထင်ပါတယ်။ လင်းထက်က ဒါဆို ထုတ်ထားလိုက်တော့မယ် မလုပ်ပါနဲ့ မောင်ရယ် လင်းထက်ကား မသူဇာကို လိုးရတာ ကြိုက်သွားပါပြီ။ ကိုဇော်အောင်က ပစ်ထားပေမဲ့ သူမပစ်ထားပါဘူး ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း လုပ်ရအောင်ကြံတေ့ာတာပါ။
“ကျွန်တော် နေ့တိုင်းလုပ်ရင်ခံမှာလား” “အိုမောင်ရယ် လုပ်ပါမမကို မင်းချချင်ရင်နောက်ရောနေ့တိုင်းချ” “အင်းအင်း ဘွတ်ဘွတ် ဖောက်ဖောက်” “အား အင်း” ခေါင်းအုံး ခံထားပြီး ခါးကော့ နေတာကြောင့် လင်းထက်ရဲ့ အပေါ်စီးက ဆောင့်ချက်တိုင်းကို သူဇာ ရက်ရက်စက်စက် ခံနေရပါ တယ်။ လင်းထက် အဖို့လည်း မသူဇာကို လုပ်ရတာကို ကြိုက်သွားပါပြီ။ သူဇာကလည်း စောက်ပတ်ထဲကို လင်းထက် လီးကို ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း ဖင်ရှုံ့ရှုံ့လိုက်တာကြောင့် စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက လင်းထက်ရဲ့လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးပြီး လိုးရတာ အရမ်းကို ကောင်းစေပါ တယ်။ ဖွတ်ဖွတ်ဘတ်ဘတ် စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သံထွက်သံတွေက အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ လင်းထက်ဟာ လရေတွေကို သူဇာ့သားအိမ်ထဲ ပန်းထုတ် လိုက်ချိန်မှာတော့ သူဇာလည်း သူမအဖုတ်ထဲမှ စောက်ရည်များကို စီးကျလာရာ သူမဖင်ဝအထိပင် ထိုအရည်များက လိမ့်ဆင်းသွားပြီး သူမအဖုတ်ထဲ လီးတပ်ရက် တန်းလန်းနှင့်ပင် သူဇာကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ကျ သွားလေတော့သည်။
(၁၂) တစ်ပတ်ခန့် သူဇာကား လင်းထက်၏ လိုးခြင်းကို နေ့ရောညပါ ကုန်းလို့ အားရသွားသော အခါ သူမအိမ်သို့ ခရီးမှ ပြန်လာသယောင်ပြုကာ ပြန်သွားသည်။ ကေသီကား သူမချစ်သော သူငယ်ချင်း၏ နှလုံးသားရောဂါကို သူမချစ်သောမောင်မှ ကုစားပေးနိုင်သဖြင့် ကျေနပ်သွားသည်။ သူမချစ်သောမောင်ကား သူမအပေါ် သစ္စာရှိသော်လည်း သူမသူငယ်ချင်း၏ စိတ်ရောဂါကို ကုနိုင်သဖြင့် မောင့်ကို ကျေးဇူးတင်မိသည်။ နှစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် သူမချစ်သော မောင်အတွက် သားလေးတစ်ယောက် မွေးပေးခဲ့သည်။ ထိုသား၏ စရိုက်မှာ ကိုကြီးမောင်နှင့် တူသည်။ ပြီးတော့ လင်းထက်နှင့် သူမကလည်း အရမ်းချစ်ကြသည်။ ကလေးကလည်း လင်းထက်ကို သူမထက်ပိုချစ်သည်ဟု ထင်မိသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ တည်းခိုခန်းတွင် သူမ စီမံမှုကြောင့် မသူဇာကို သူချစ်သော မမဆန္ဒအရ သွားပြီး လိုးပေးခဲ့သော လင်းထက်သည် သူဇာကို စွဲသွားသဖြင့်နောက် မမကေသီနှင့် ကိုဇော်အောင် မသိအောင် ခဏခဏ ချိန်းတွေ့ပြီး လုပ်ခဲ့တာကြောင့် သူဇာမှာ သူချစ်သော မောင်အတွက် သားလေးတစ်ယောက် ရခဲ့သည်။ ကိုဇော်အောင်ကား လင်းထက် သူ့သားကိုချီလျှင် ကလေးချစ်တတ်သောကြောင့် ချီတယ်လို့ ထင်မိပေမဲ့ သူဇာကတော့ ကလေးကိုချီတိုင်း ပြုံးစိစိဖြစ်နေတာကို သူသတိမထားမိပါ ) ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged နတေို့ငျးလုပျရငျခံမှာလား